မန်းကိုကို ~ Mahn Ko Ko: အတ္တတောင်ကိုကျော်၍ အမုန်းသမုဒ္ဒရာထဲသို့ ခုန်ဆင်းခြင်း
အတ္တတောင်ကိုကျော်၍ အမုန်းသမုဒ္ဒရာထဲသို့ ခုန်ဆင်းခြင်း
အရင်က မပြောဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေကို စုစည်းလိုက်ပါတယ် ။
ဒါတွေအားလုံးဟာ ကျနော့်သဘောထားပါ ။ တိကျတဲ့ စာအုပ်စာတန်း အချက်အလက်တွေကို အခြေ
ခံမထားပါဘူး ။ သိနားလည်ထားတာတွေနဲ့ ကိုယ်တွေ့ ကြားသိခဲ့ရတာတွေရယ်ကို ယှဉ်တွဲပြီး ယထာ
ဘူတကျအောင် ကြိုးစားတွေးမြင်ကြည့်ထားပေမဲ့ လွတ်ကွက် ဟာကွက်တွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ် ။ စိတ်
ခံစားချက်အပေါ် အခြေမခံတဲ့ ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်တွေကို အမြဲတမ်း လက်ခံနားထောင်ပေးသွားမှာပါ ။
Russia ရောက် လူဆိုးတွေလား
ဒီမိုကရေအစီအကြောင်း ပြောဆိုပြီး လိုလားကြောင်း အရိပ်အယောင် ပြမိတာနဲ့ “ဒီမိုတွေ” ဆိုတဲ့
ရထားတွဲထဲ ရောထည့်ခံရတတ်သလို ၊ ရုရှကို ပညာတော်သင် သွားသူတွေ အပါအဝင် လူများစု စီး
မျောနေတဲ့ ပင်မသဘောထားတွေကို လက်မခံပဲ မေးခွန်းထုတ်သူတွေကိုလည်း အာဏာရှင်တွေရဲ့
လက်ကိုင်တုတ်စာရင်းထဲ အမေးအမြန်းမရှိ တွန်းသွင်းတတ်ကြပြန်တာ မကြာမကြာ တွေ့နေရပါ
မကြာခင်က ထွက်လာခဲ့တဲ့ သတင်းတစ်ခုကို ကြည့်မိပါတယ် ။
ရုရှတက္ကသိုလ်တစ်ခုက မြန်မာစစ်ဗိုလ် ကျောင်းသားတွေကို ကျောင်းအဆောင်တွေကနေ နှင်မ
ထုတ်ရလေအောင် သံအမတ်ကြီးဆီက ရေးပို့တဲ့ သတိပေးစာ တစ်စောင်ရယ် ၊ မိန်းမအဝတ်စားနဲ့
ကနေတဲ့ ပုံအပါအဝင် အခြားဓါတ်ပုံအချို့ ပါပါတယ် ။
ဒါကို ဆွမ်းကြီး ဝိုင်းလောင်းသူတွေရှိသလို ၊ မခံနိုင်လို့ ပြန်ပက်တဲ့ စစ်ဗိုလ်ကျောင်းသားတွေလည်း
ရှိပါတယ် ။ တကယ်ပဲ စစ်ဗိုလ်တွေအားလုံး အဲဒီလိုပဲလား ၊ သူတို့က အခြောက်တွေလား စသည်ဖြင့်
မေးခွန်းတွေ ရှိလာပါတယ် ။
ကျနော့်အတွေ့အကြုံနဲ့ သိနားလည်သမျှတော့ - မြန်မာပြည် အစားစာတွေဟာ အိန္ဒိယအစားစာ
တွေလောက် မနံပေမဲ့ ၊ အနံ့သက်ပြင်းသလို ၊ မြန်မာတွေရဲ့ နေထိုင် စားသောက် ချက်ပြုတ်မှု အလေ့
တွေဟာ အချို့နိုင်ငံတွေမှာ အသင့်တင့် ညစ်ပတ်သလို ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ယင်ကောင် ၊ ပိုးဟပ်နဲ့
ကြွက်တွေကို ဆွဲဆောင်တဲ့ ငပိ ကနေစတဲ့ အခြေခံ အစားအသောက်တွေကို သုံးကြတာ ငြင်းလို့မရ
ပါ ။ ဝေးဝေးလံလံတောင် ကြည့်စရာမလိုပါ ၊ ထိုင်းနိုင်ငံကနေစပြီး မလေးရှား ၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွေကိုပဲ
ကြည့်လိုက်ရင် ၊ ရန်ကုန်လို မြို့ကြီးမှာနေခဲ့လို့ မြို့ကြီးသားလို့ ထင်ရပေမဲ့ ၊ ဟိုရောက်တော့ တော
သားလိုဖြစ်နေတာတွေ အများကြီး ကြုံကြရတာပါပဲ ။ အပြုအမူ ၊ အဝတ်အစား ၊ အနေအထိုင်သာမ
က တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးအပိုင်းမှာလည်း နှစ်နဲ့ချီ ကြာပြီးမှ အလိုက်သင့် နေနိုင် ပြင်နိုင်လာကြ
မိန်းမအဝတ်အစား ဝတ်တာ ၊ ကတာ ဟာမျိုးဟာလည်း သာမန်အသိုင်းအဝိုင်းတွေမှာ လုပ်တတ်
ကြတာပါပဲ ။ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင် မရှိသလောက်ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓါတ် ဝင်သွားသူတွေဆီမှာ
တော့ အုပ်စုလိုက် လုပ်သမျှဟာ တင့်တယ်နေမှာပါပဲ ။ ရှက်ဖို့နေနေသာသာ ပျော်စရာလို့တောင်
ထင်နေနိုင်ကြပါသေးတယ် ။ လုပ်သင့်တယ်လို့ မဆိုလိုပါ ၊ ဖြစ်တတ်တာကို ပြောတာပါ ။ မည်သူ
မဆို ဒီလိုပဲ သင်္ခန်းစာယူ ရင့်ကျက်လာကြရတာကို ထောက်ပြချင်တာပါ ။
ကျနော် ပြောချင်တာကတော့ မြန်မာပြည်သူတွေထဲက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ စစ်ဗိုလ် စစ်သားတွေဟာ
သာမန် အရပ်သားတွေထက် အများကြီး ပိုထူးပြီး ဖြစ်ပျက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အခြားမြန်မာ ပြည်
သားတွေလည်း အဲဒီလို အဖွဲ့အစည်းနဲ့ စုစည်းနေထိုင်မိကြရင် အဲသည်လိုပဲ ဖြစ်နိုင်ကြပါတယ် ။ နား
လည်ပေးနိုင်ကြရင် ပဋိပက္ခတွေလည်း နည်းသွားနိုင်ပါတယ် ။
နောက်ပြီး ဓါတ်ပုံတစ်ပုံထဲမှာ ပါတာကိုကြည့်လိုက်တော့ စစ်ဗိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ ခရီးသွားအိတ်
တွေထဲမှာ ဒုက္ခသည်အိတ်လို့ ခေါ်တတ်ကြတဲ့ မြွေခွံအိတ်တွေလည်း ပါတာကို တွေ့ရပါတယ် ။ အဓိ
ပ္ပါယ်ကတော့ စစ်ဗိုလ်တွေဟာ အခွင့်ထူး ပိုရကြပေမဲ့ မြန်မာပြည်က လာတာချင်းတူရင်တော့ နည်း
တာနဲ့ များတာပဲ ကွာပါတယ် ။ တစ်မူးလောက်ပဲ ပိုရှူနိုင်ပြီး ၊ ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲ မတိမ်းမယိမ်းတွေပါပဲ ။
ဒီတော့ ကျနော့်သဘောကတော့ ဘာမှ အထွေထူး ပုတ်ခတ်ပြောဆိုနေစရာ မလိုလှဘူး ယူဆပါ
တယ် ။ အပြောမတော်တော့ ဟိုတစ်ခါ ဒေါ်စုပုံကို သံရုံးအဝင်ဝမှာ သွားချပြီး ၊ ဒေသခံ နိုင်ငံသားက
ခြေထောက်နဲ့ ကန်တာကို စစ်အစိုးရလူက စော်ကားပါတယ်ဆိုပြီး အုတ်အော်သောင်းတင်း လုပ်ခဲ့ကြ
သလို လမ်းချော်သွားတာမျိုးပဲ ဖြစ်မှာစိုးပါတယ် ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ငယ်ရွယ်တဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေ ဖြစ်နေ
သေးပေမဲ့ တွေးတတ် ဆင်ခြင်တတ်သူတွေလည်း အများကြီးရှိနိုင်တာမို့ အရသာခံ ပြောဆိုကြမယ့်
အစား ၊ ဆင်ခြင် ချင့်ချိန်ပြီး အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးတာ တွေက ပိုကောင်းမယ် ထင်ပါတယ် ။ စုန်း
ပြူးကလေးတွေ ရှိနေတတ်တာဟာလည်း နေရာတိုင်းမို့ ၊ တစ် ယောက် နှစ်ယောက်စအတွက်လည်း
အားလုံးကို ကြုံးပြီး မပြောသင့်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ် ။ တွေးမိတာရှိပါ တယ် ၊ သာမန်ပြည်သူတွေ အ
နေနဲ့ စိတ်တွေ မွန်းကြပ်ပိတ်လှောင်နေကြတာမို့ ၊ ထွက်ပေါက်ရှာရင်း အခွင့်သင့် လာတဲ့ အခါမျိုးတွေ
မှာ လွတ်ထုတ်ကြရာက တခါတရံ အရှိန်လွန်သွားကြတာမျိုးတွေလည်း ပါမှာပါပဲ လို့ပါ ။
“ဝ”တွေအကြောင်းကိုတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ကြားဖူးနေခဲ့ပါတယ် ။ အနှစ် ၃၀ ဝန်းကျင် ဆိုပါစို့ ။
အိမ်ထောင်ကျတော့လည်း မဒမ်မန်းကိုကိုဆီကတဆင့် ထပ်ကြားရတာတွေ ရှိတဲ့အပြင် ၊ သတင်းနဲ့
စာနယ်ဇင်းတွေမှာ ဖတ်မှတ်ဖူးတာတွေ အသင့်တင့်ရှိခဲ့ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် စစ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေ ၊
မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေက များပါတယ် ။
ပြည်မ စစ်တပ်ထဲမှာ “ဝ” ကလေးငယ်တွေကို သနားလို့ ခေါ်လာတယ် ဆိုတာမျိုးတွေ ငယ်စဉ်က
တည်းက ကြားနေခဲ့ရပါတယ် ။ ကယ်တင်လာခဲ့ကြသယောင် ဆိုပေမဲ့ သူတို့လေးတွေရဲ့ လူမှုဘဝ တိုး
တက်လာတဲ့သတင်း ကြားရခဲပါတယ် ။ ခိုင်းဖို့ ခေါ်လာတဲ့သဘောမျိုးက ပိုများပါတယ် ။
သူတို့ဟာ အရင်က ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ ကွပ်ကဲမှုအောက်မှာ ရှိခဲ့ပြီး ၊ ခုနောက်ပိုင်းလည်း မူးယစ်ဆေး
ဝါးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မကြာခဏ သတင်းထွက်လာတတ်တာရယ် ၊ တရုတ်တွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုတွေ ရှိ
တာကြောင့်လည်း တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဖူးလို့ ဆိုချင်သူတွေလည်း မရှားပါ ။
ကျနော် မြင်သမျှတော့ - လူဦးရေ သိန်းကဏန်းပဲရှိတဲ့ သူတို့တတွေဟာ လုပ်ရဲကိုင်ရဲ ရှိသူတွေပါ ။
သခင် လက်ပြောင်းတာတွေ အဆင့်ဆင့် ကြုံခဲ့ကြရပြီး ၊ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ အမျိုးမပြုတ်ဖို့ကို ကြံ့ကြံ့ခံနေ
ရတဲ့ လူမျိုးစုတစ်စုပါ ။ တရုတ်နဲ့ ပေါင်းနေတာမို့ တစ်ဂိုဏ်းထဲ သွတ်သွင်းတာထက် သူတို့ ဘာကြောင့်
ဒီလို လုပ်ရသလဲဆိုတာ အရင်းအမြစ်ကို လိုက်သင့်ပါတယ် ။ အပေါ်ယံလျှပ်ပြီး အမုန်းပွားတာမျိုးတွေ
ဟာ အကျိုးမဖြစ်ပါဘူး ။
စာတွေထဲမှာတော့ ကရင်တွေရဲ့ “ဖားစည်”တွေကို သွန်းလုပ်ခဲ့သူတွေဟာ “ဝကရင်”တွေဖြစ်တယ်
လို့ ဆိုထားပါတယ် ။ စာရဲ့ဆိုလိုချက်ကို အတိအကျ အနက်ပြန်ပြဖို့ မတတ်နိုင်ပေမဲ့ အနည်းဆုံးတော့
“မွန်ကရင်” ၊ “ဗမာကရင်” ဆိုတဲ့ စကားတွေနဲ့ နှိုင်းချိန်ရင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရာပေါင်းများစွာကတည်းက
“ဝ”နဲ့ ကရင်လူမျိုးတွေ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ ယူဆလို့ ရပါလိမ့်မယ် ။
အကိုင်မတော်ရင် အပူလောင်တတ်တဲ့ hot potato ကတော့ ရိုဟင်ဂျာပေါ့ဗျာ ။
ပြောကြ ဆိုကြ ဆဲကြ ၊ ကိုယ့်ဖက်ကိုယ်ယက်ကြ ၊ မာန်ဝင့်ကြနဲ့ ခံစားမှုနောက် လိုက်နေကြသူတွေ
က အများစုပါ ။ ဒါကိုကြည့်ရင် ဆက်စပ်ပြီး ရင်လေးစရာတွေက အပုံအပင် ။
အတိုဆုံးပြောရရင်တော့ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားအများစုဟာ ဓါးစက်ကို နတ်ပန်းဆိုပြီး ပုခုံးပေါ်
ထမ်းထားချင်တာနဲ့ သွားတူနေသလို မြင်ယောင်မိပါတယ်။ ဒုက္ခကို ဒုက္ခလို့မမြင်ကြပဲ ၊ ကိုယ့်ဆန္ဒတွေ
နဲ့ ယစ်မူးသာယာနေကြပြီး စကားစလိုက်ရုံနဲ့ မျက်လုံးမီးဝင်းဝင်းတောက် ရန်ရှာမယ့် အမိုက်မှောင်ဖုံး
နေတဲ့ ယက္ခ ကုမ္ဘန်တွေလည်း မရှားပါ ။ နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ဆိုပြီး ပညာဗဟုသုတ အတွေးအခေါ်မြှင့်
တင်မယ့် critical thinking ဆိုတာမျိုးတွေကို လေ့လာသင်ယူ အသုံးချဖို့ကို အသာထားလို့ အခြေခံအ
ဆင့် common sense တောင် အတွေးထဲကပ်နိုင်ကြဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေက အများစုလို့တောင်
ယုံကြည်ယူဆမိပါတယ် ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ မုန်းတဲ့စိတ်နဲ့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် အရှိကို အ
ရှိအတိုင်း မြင်ကြည့်ကြမှ ရှေ့ဆက်မယ့် ကိုယ်စီဘဝခရီးအတွက် အကောင်းဆုံး အမှန်ဆုံး ဆုံးဖြတ်
ချက်တွေ ချဖြစ်ကြအောင်ရယ်ပါ ။ ပဋ္ဌာန်း ဆက်နေကြတယ်ပြောပြော ကျနော် တို့အားလုံးရဲ့ အနာဂါတ်
တွေဟာ ဆက်စပ်နေကြတာပါ ။ ဆုံးရှူံးစရာ ရှိရင်လည်း ဝေမျှခံကြရမှာ သေချာပါတယ် ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့နာမည်ကို ကျနော်မသိခဲ့ရိုး အမှန်ပါ ။
ဒါပေမဲ့ မသိတာဟာ မရှိဖူးလို့ အနက်မထွက်ပါဘူး ၊ အခြားနာမည်တစ်ခုနဲ့ ရှိနေခဲ့ကြနိုင်ပါတယ် ။
အခြားနယ်တွေကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်ပေမဲ့ ၊ ဘားအံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ ပြောပါရစေ ။
ငယ်စဉ်က ရခိုင်မှာ မွတ်ဆလင်ကုလားတွေ ရှိတယ်လို့ သိခဲ့ရပါတယ် ။ ၁၉၇၀ ကျော်ပိုင်းမှာ ဘင်္ဂ
လားဒေ့ရ်ှကို တစ်သိန်းကျော်လောက် မောင်းထုတ်ခဲ့ရာမှာ ၊ နောက်ပိုင်း နှစ်သိန်းကျော်လောက် ပြန်
ဝင်လာခဲ့တယ်လို့ ကြား သိခဲ့ရဖူးပါတယ် ။ နောက်ပြီး အဲဒီအချိန်က ရခိုင်မှာ တာဝန်ကျခဲ့တဲ့ စစ်ပြန်
တစ်ဦးရဲ့ အဆိုအရ သူတို့ကိုယ်တိုင် အဲဒီ မွတ်ဆလင်ကုလားတွေထဲက ရွာစွန်မှာ နေသူမျိုးတွေကို
ညအချိန်သွားပြီး မိသားစုအလိုက် သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့ကြတာတွေ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
နောက်ထပ် ရခိုင်မှာ နေဖူးသူတစ်ယောက်ရဲ့ အပြောအရတော့ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ကုလားတွေ
ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်က ဘယ်သူမှ မစားတဲ့ ရေစိုစပါးတွေကို သူတို့စားဖို့အတွက် လောင်းလှေလို လက်
လှော်လှေရှည်ကြီးတွေနဲ့ လာခိုးဝယ်တတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ ဒါကို ဗမာရေတပ်ကသိရင် အမြောက်
နဲ့လိုက်ပစ်ပါတယ်တဲ့ ။ အဲဒီကမှ အမြောက်ဆံ လှေနားကျလို့ လှေမှောက်ရင်တောင် ကုလားတွေဟာ
လက်ပစ်ကူးပြီး ပြေးကြပါသတဲ့ ။ ငယ်စဉ် ဘယ်လိုမှ မခံစားတတ် ၊ မစာနာတတ်စဉ်အရွယ်က သိခဲ့ရ
အရွယ်နည်းနည်း ရလာတော့ မှတ်ပုံတင်လုပ်ကြရာမှာ သိလာရတာတွေ ရှိပြန်ပါတယ် ။
မှတ်ပုံတင်မှာ အဖိုးအဖွားတွေရဲ့ မိဘတွေအထိ ဖြည့်ကြရရာမှာ တော်ရုံ တိုင်းရင်းသားတွေတောင်
မဖြည့်နိုင် ကြပါဘူး ။ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် ကုလားတွေကို စာရင်းကောက်ရာမှာလည်း အချို့အဖိုး
ကြီး အဖွားကြီးတွေဆို သူတို့မိဘတွေဟာ ဘင်္ဂလားက လာတာပါလို့ ဖြေကြပါတယ် ။ အတိအကျ
လည်း မပြောတတ်ကြတော့ပါဘူး ။ သူတို့လေသံအရလည်း အသံမပီသူတွေမဟုတ်လို့ ဒီမှာမွေး ဒီ
မှာကြီးကြတာ သိသာပါတယ် ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် စာရင်းချုပ်တော့ မှတ်ပုံတင် မရကြပါဘူး ။ သူတို့
ထဲက ဘားအံသားဖြစ်လျက်နဲ့ မြို့ပြင်ထွက်တာနဲ့ အဖမ်းခံရသူမျိုးလည်း တွေ့ဖူးပါတယ် ။ တဆက်
ထဲ လဝကမှာလုပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့အပြောအရ FRC ကိုင်ထား သူတွေကို သွားစစ်ရင် သူ့အိမ်မှာ
မဟုတ်ပဲ ဘေးအိမ်မှာတွေ့ရင်တောင် ဖမ်းချုပ်လို့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ မှတ်သား စရာကောင်းတဲ့
ချစ်စရာဥပဒေလို့ ဆိုချင်သူများ ရှိမလားတော့ မပြောတတ်ပါ ။ အနည်းဆုံး အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံတွေမှာ
အဲဒီလိုများရှိခဲ့ရင် ခုလောက်ဆို မြန်မာပြည်ဟာ ပြောင်းလဲသွားလောက်ပါပြီ ။
ဆက်စပ်ပြီးပြောချင်တာက ဘားအံမြို့တစ်ဝိုက်က ကရင် ၊ ပအို့ဝ်နဲ့ မွန်ရွာတွေဟာ ကုလားကော ၊
ဗမာတွေကိုပါ အဟန့်အတားနည်းနည်းနဲ့ လက်ခံတတ်တဲ့ အလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုရပါမယ် ။ ဒါကြောင့်
ကုလားရွာတွေ ရှိသလို ၊ ဗမာရွာတွေလည်း ကြားညှပ် ရှိတတ်ပါတယ် ။ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို ဘင်္ဂ
လားနောက်ခံနဲ့ မွတ်ဆလင်ကုလားတွေ ရှိသလို ၊ အထက်မြန်မာပြည်ဖက်မှာ လူသတ်မှုတို့လို အမှု
ကျူးလွန်ခဲ့ပြီး တိမ်းရှောင်လာတဲ့ ဗမာတွေလည်း အသင့်အတင့် ခိုလှုံနေတာတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ သိ
သူများပြောပြလို့ မှတ်သားခဲ့ရဖူးပါတယ် ။ ကျနော်တို့ တတွေ အေးအေးချမ်းချမ်း နေတတ်ကြတာလား ၊
ဧည့်ဝတ်ကျေတာလား ၊ တုံးအကြတာလားတော့ ကိုယ့်နယ် နဲ့ကိုယ်မို့ အကတိလိုက်သလို ဖြစ်မှာစိုး
လို့ အဆုံးအဖြတ် မပေးချင်ပါ ။
ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ သိလာရတာတွေ အနည်းအကျဉ်း ရှိလာပြန်ပါတယ် ။
တစ်ခုကတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို သူတို့နိုင်ငံသားအဖြစ် လက်မခံပဲ ခိုလှုံရေးစခန်း
ဖွင့်ထားပေးတယ် ဆိုတာမျိုးပါ ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ရခိုင်မိတ်ဆွေကြီးတစ်ဦးရဲ့ ပြောပြချက်အရ ၊
အခု ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီက ဘင်္ဂလားနဲ့ ရခိုင်ကြားမှာ ဟိုဖက်ကူး သည်
ဖက်ကူးပြီး လယ်ယာကိုင်းကျွန်းတွေမှာ သူရင်းဌားအလုပ် လုပ်ခဲ့ကြသူတွေ များတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
လွတ်လပ်ရေးရလို့ နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ် အတိအကျခွဲပြီး သတ်မှတ်တဲ့အခါကျတော့ တချို့ ဟိုဖက်ကျန် ၊
တချို့ သည်ဖက်မှာရှိနေကြတဲ့ အနေအထားမျိုး ဖြစ်သွားကြပါတယ်တဲ့ ။ ကျနော့်အနေနဲ့က မွန်ဂိုလီး
ယား ၊ အာရပ်နဲ့ အာဖရိကမှာနေတဲ့ နေရာအတည်တကျ မရှိကြတဲ့ လူမျိုးစုတွေကို ပြေးမြင်မိလိုက်ပါ
အပေါ်က ရေးခဲ့တာတွေအပြင် ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထည့်တွက်စရာတွေ အချို့လည်း
ရှိပါသေးတယ် ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဟာ သူ့လူနဲ့သူတောင် နှစ်တိုင်းရေကြီးပြီး လူဦးရေလည်းများတာမို့ ၊
ရိုဟင်ဂျာဆိုသူ သူတို့နဲ့ အရာရာထပ်တူမကျသူတွေကို တာဝန်ယူချင်မှာတော့ မဟုတ်ပါ ။ ရိုဟင်ဂျာ
တွေအနေနဲ့လည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ အနှိမ်ခံ ဖယ်ကြဉ်ခံထားကြရရာမှာ လူသားတွေရဲ့ သဘာဝအတိုင်း
ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ရရာနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကြိုးစားလာခဲ့ကြရတာတွေ ရှိမှာပါ ။ ဘာသာ ၊ ဓလေ့ စသည်ဖြင့်
မြန်မာပြည်ရဲ့ ပင်မလူများစုနဲ့ မတူပေမဲ့ အရာတိုင်းကို ပြစ်ချက်တွေလို့ ပြောဖို့လည်း ခက်မှာပါ ။
ဆက်မပြောခင် မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောချင်ပါသေးတယ် ။
ပြည်ပထွက်ပြီး ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ရှာကြတဲ့အခါ ၊ သန်းကဏန်းနဲ့ချီပြီး နိုင်ငံမျိုးစုံကို ရောက်ကြရ
ပါတယ် ။ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့ကြရတာ အားလုံးသိပါတယ် ။
ဘယ်မှာမဆို မြန်မာပြည်သားဖြစ်ရတာ မျက်နှာငယ်ရတယ်ဆိုတာလည်း အများသိပါ ။ ကိုယ့်ကို အုပ်
ချုပ်သူတွေ မကောင်းလို့ချည်းလား ဆိုတော့ ၊ မဟုတ်ပါ ။ ရောက်တဲ့နိုင်ငံက လူခံတွေရဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံ
မှုကလည်း အင်မတန် အရေးပါပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ မလေးရှားနိုင်ငံလိုတွေမှာ ကြုံနေကြ
ရတာ ဒုနဲ့ဒေးပါ ။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးတဲ့ ၊ ဒီမိုကရေစီ ရင့်ကျက်ပြီးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတောင် အနည်းနဲ့အများ ရှိတတ်
ပါတယ် ။ မလေးရှားမှာ ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီး နေတာတောင် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် မရတာတွေ ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ
မှာ မှတ်ပုံတင်ဝယ်ပြီး ရပ်တည်ရတာတွေ ၊ နယ်စပ်တစ်ဝိုက်မှာ အသားလွတ် အနိုင်ကျင့်တာနဲ့ အချို့
ဆို အသတ်တောင် ခံခဲ့ကြရတာတွေဟာ စာရင်းလုပ်နိုင်ရင် စာရွက်တွေနဲ့ ဆံ့မှာတောင် မဟုတ်ပါဘူး ။
အဲဒီ ခံရတဲ့အထဲမှာ ကိုယ်တွေလို ကျောမွဲတွေက အများစုပေါ့ ။
ဆက်စပ်တွေးပြီး စာနာကြပါလို့ အင်မတန်ကို ပြောချင်လှပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ .. ဒါပေမဲ့ ...
facebook လိုအပေါ်မှာ တက်ကြည့်လိုက်ရင် မီးဝင်းဝင်းတောက်မတတ် မာန်တွေနဲ့ လက်သီးလက်
မောင်းတန်း နေကြတာဟာ ၊ အမုန်းအက်ဆစ်မြစ်ထဲမှာ မာနအောင်လံလွင့်ပြီး အပြိုင်အဆိုင် ပန်း
တိုင်ဆီကို အလုအယက် သွားနေကြသလိုပါ ။ ရင်လေးဖို့အသာထား အသက်တောင် မရှူရဲလောက်
အောင်ပါပဲ ။ ကိုယ့်ရဲ့ မေတ္တာရေတစ်စက် ဟာ လက်တစ်ဖျောက် မတီးနိုင်ခင်မှာ အငွေ့ပျံသွားမှာ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ သိန်းနဲ့ချီတဲ့ အိန္ဒိယကုလားတွေကို ဝါးလုံးရမ်း မောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးပြီ ။
တော်လှန်ရေးကောင်စီတက်တော့ ဘာသာရေးနဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်တွေကို သိမ်းကြုံးယူခဲ့ပြီးပြီ ။
နိုင်ငံရေးအသိ ၊ အတတ်ပညာနဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကို နိမ့်ကျနိုင်သမျှ နိမ့်ကျအောင် ၊
ချွတ်ခြုံကျအောင် အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်နိုင်ခဲ့ကြပြီ ။
အခုလည်း အခွင့်ရေး တိုးလိုချင်တဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေကို အပြုတ်ဖြုတ်ဖို့ ကြိုးစား
စိုက်တဲ့အတိုင်း ရိတ်ရတယ်ဆိုတာ မကြာခဏ ကြုံရတတ်တာမျိုးပါ ။
musical chair လိုပဲ အလှည့်ကျ ကံရထားကြီးဟာလည်း ရပ်မနေတတ်ပါဘူး ။
လူတိုင်းဆီ အသွင်တစ်မျိုးပြောင်းပြီး ရောက်လာကောင်း ရောက်လာမှာပါ ။
ဘယ်သူမှလည်း လွတ်ကင်းမယ်လို့ အာမခံချက် မရှိပါ ။
မကြာမတင်မှာလည်း ကျနော်တို့တတွေ မျက်မှောက်ပြုရမယ့် သွေးရင်းသားရင်းတွေ တစ်သုတ်ပြီး
တစ်သုတ် ရှိလာပါဦးမယ် ။ သူတို့တွေထဲက တစ်သုတ်ကတော့ သန်းနဲ့ချီပြီး ပြည်ပထွက် အလုပ်လုပ်
ကြသူတွေရဲ့ ပြည်ပမှာ မွေးဖွားလာကြမယ့် သားသမီးတွေပါ ။ ဘယ်လိုပဲ သွန်သင်သွန်သင် ၊ သူတို့စိတ်
ထားတွေဟာ ကြားနေ (hybrid) လို့ ခေါ်နိုင်မယ့် အမြင်တွေနဲ့ မွေးဖွားလာကြမှာပါ ။ သောင်း သိန်း
ကဏန်းရှိတဲ့ သူတို့တွေဟာ ခုချိန်မှာလို မီးဝင်းဝင်းတောက်နေကြတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဦးလေးတွေ ၊ အဒေါ်
တွေရဲ့ မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး အံ့သြမိကြပါလိမ့် မယ် ။ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ဖြစ်တည်ကြပါလိမ့်မယ် ။ အဝေး
ကို ရှောင်ဖယ်သွားကြကောင်း ရှောင်ဖယ်သွားကြပါလိမ့်မယ် ။
ဒီပို့စ်တစ်ခုထဲနဲ့ အဆိုးအကောင်း ယှဉ်ကြည့်စရာ အသေးစိတ်ကို ရေးပြဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါ ။
ဒါပေမဲ့ ရှည်ရှည်လျားလျား ဖတ်လာပြီးတဲ့နောက် ၊ စာဖတ်သူ မတွေးမိတာလေးအချို့ တွေးမိနိုင်ဖို့
ကျနော့် ပြောချင်တဲ့ သတင်းစကားတွေကို မြင်မိပါရဲ့လား ။
ကိစ္စ မရှိပါ ။
အချိန်တွေ ရှိပါတယ် ။
ထိုင်နေတဲ့ခုံမှာ ကျောလေး အရင်မှီလိုက်ပါ ။
အသက်လေး ဝအောင်ရှူလိုက်ပါဦး ။
၃၀ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၁
Posted by မန်းကိုကို at 10/30/2011
White November 2, 2011 at 1:29 AM
ရှယ်သွားပါတယ်..။ ဇစ်မြစ်ကို သေချာမလေ့လာဖူးလို့ မဝေဖန်တတ်ပေမဲ့ ဖဘမှာ လူများစုရဲ့ဒေါသကိုကြည့်ပြီး (လူလူချင်းကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့) မနစ်မြို့မိဘူး..။ ဒီအချိန်မှာ ဒီစာလေးကို ဖတ်ခွင့်ရလိုက်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်...။
Thu November 2, 2011 at 4:28 PM
Migrating or arrival of Bengla or Rohinja to Yangon is likely as winning of US lottery.
Racial mingling is common occurrence at border area, but most worry on FB is religious intrusion.
We have to learn the fallen of Jave islands, Afghanistan, Spain, Crusades and story of "Demandingashed of camel's head".
မန်းကိုကို November 3, 2011 at 12:31 AM
လာဖတ်တာရော ၊ share သွားတာတွေအတွက်ပါ ဝမ်းသာပါတယ် ။ ဖဘ မှာကတော့ အကျိုးမရှိ အဆဲခံရမှာပဲ အဖတ်တင်နိုင်တာမို့ အုပ်စုတွေထဲမှာတောင် ဒီပို့စ်ကို မထည့်တော့တာပါ ။ ဒီပို့စ်ထဲမှာလည်း အားလုံးဖတ်ရ အဆင်ပြေအောင် ၊ အတတ်နိုင်ဆုံးလည်း ဘက်မလိုက်မိအောင် ၊ ကြားဖူး နားဝတွေထက် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ခဲ့သူနဲ့ ၊ ကိုယ်တွေ့ ဖတ်မှတ် ကြုံခဲ့ရတာတွေကို အသားပေး ရေးထားပေးပါတယ် ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ထားနိုင်သူတစ်ယောက် လာဖတ်တယ်ဆိုတာ သိရလို့ ဝမ်းသာပါတယ် ။ ဒီလိုလူတွေ များမှ ၊ အားကောင်းလာမှသာ နီးစပ်ရာ ၊ သက်ရောက်မှု ရှိရာတွေမှာ မျက်ရည်အကျ နည်းနိုင်ကြမယ်လို့ ယုံကြည်တယ် ။ တူညီသော အကျိုးကို ခံယူရရှိ နိုင်ပါစေလို့လည်း ဆန္ဒပြုပေးလိုက်ပါတယ် ။
ပထမဆုံး ဘာသာရေးကိစ္စ ဖြစ်တယ်လို့ လိုရင်းပြောတာကို ဝမ်းသာပါတယ် ။
ထပ်ပြီး ဖြည့်ပေးရရင်တော့ လူမျိုးရေးလည်း ပါပါတယ်လို့ အသေအချာ ပြောပါရစေ ။
အမှန်ကတော့ ပြောပြချင်တာ အများကြီး ရှိပါတယ် ။ မျက်နှာချင်းဆိုင် သာဆိုရင် - မူဆလင် ၊ ရိုဟင်ဂျာ ၊ ဗမာ ၊ ရခိုင် ၊ အခြားတိုင်းရင်းသား စသည်ဖြင့် ဘယ်လူမျိုးနဲ့ ဘာသာ နောက်ခံရှိသူကိုမဆို ၊ ဘယ်အတိုင်း အတာလောက် ပြောတာကို လက်ခံနိုင်မလဲ ဆိုတာအပေါ် မူတည်ပြီး အကောင်းအဆိုး ပြောလို့ ဖလှယ်ကြလို့ ရတာတွေ ရှိပါတယ် ။ ဘယ်သူမှ အကောင်းချည်း မရှိသလို ၊ အဆိုးချည်းလည်း မရှိကြပါဘူး ။
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသူတွေဟာ ရန်ကုန်ရယ် မဟုတ်ပါဘူး ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ၊ မွန်ပြည်နယ် ၊ ကရင်ပြည်နယ်တွေကို တိုးလျိုးပေါက် ကျော်လွှားပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ မလေးရှား နိုင်ငံတွေအထိ စွန့်စားကြ ၊ ငွေထိုးကြရင်း အမြဲတမ်း ဖြတ်သွားနေ ခဲ့ကြတာ ကြာလှပါပြီ ။ ဒီလောက်ဆို Thu ထင်သလို ရန်ကုန်လောက်ကို ရောက်ဖို့ မလွယ်ဖူးဆိုတဲ့ အဆိုဟာ ၊ သတင်းနည်းနည်း လွဲနေတာ မြင်မိမယ် ထင်ပါတယ် ။ အဲဒီလို သွားနိုင်တာဟာ ဗမာစကားကို ကျွမ်းကျင်တာကလည်း အထောက်အကူ ပြုပါတယ် ။ ဆိုချင်တာက ဘင်္ဂလားသားတွေသာဆို ဒီလောက် ဖြတ်သွားကြဖို့ မလွယ်လောက်ဖူး ဆိုတာကို တွက်ပြတာပါ ။
Jave အကြောင်းကို မသိပေမဲ့ ၊ မလေးရှားကျတော့ ဘုရင်အပေါ် သစ္စာရှိကြတဲ့ မလေးလူမျိုးတွေဟာ သူတို့ ဘုရင် (စူလတန်) တွေ မွတ်ဆလင် ဘာသာကို လက်ခံ ယုံကြည်လိုက်လို့ ၊ နောက်ကနေ ကောက်ကောက် ပါသွားကြတယ်လို့ နားလည်ရပါတယ် ။ ဘယ်သူကမှ အတင်းအကြပ် လုပ်ခဲ့တယ်ရယ်လို့ မကြားမိပါဘူး ။ စပိန်မှာတော့ မွတ်ဆလင်တပ်တွေကို စပိန်နယ်စား တစ်ယောက်ကနေ ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့တာ နည်းနည်းဖတ်ဖူးပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဘာသာရေး စစ်ပွဲရယ်လို့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း နာမည်တပ်ရ ခက်မယ်ထင်ပါတယ် ။ ခရူးဆိတ် စစ်ပွဲတွေဟာလည်း သူ့ကြောင့် ငါ့ဒီလိုလုပ်တာ ၊ ငါ့ကြောင့် သူဒီလို ပြန်ုလုပ်တာနဲ့ ဂျာအေး သူ့အမေရိုက် ဇာတ်လမ်းလို့ နားလည်ရပါတယ် ။
အဲသည်လို ဟိုတစ်စ သည်တစ်စ လျှောက်ရေးရရင် အင်မတန် ရှည်ပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်ဖက်ကို ဘက်လိုက်ပါ ဆိုရင်တော့ ၊ မလိုက်နိုင်ပါဘူးလို့ ပြောရပါမယ် ။ နောက်ပြီး ပေးထားတဲ့ လင့်ဟာလည်း တစ်နာရီကျော် ကြာတဲ့ ကလစ်မို့ ကြည့်ဖို့ အဆင်မပြေပါဘူး ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မှတ်ချက်ပေးသွားတာကိုတော့ ဝမ်းသာပါတယ် ။ အကယ်၍ ကျိုးကြောင်းနဲ့ ပြောပြချင်တာ ၊ ချက်ကျလက်ကျ သက်သေပြချင်တာတွေ ရှိရင် ၊ ပြောလို့ ညွှန်လို့ ရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အပေါ်ကလို တစ်နာရီကျော် ကြာမယ့်ဟာမျိုးတွေက လွဲရင်ပေါ့နော ။
SV November 4, 2011 at 7:14 AM
အခုတင်ထားတဲ့ပို.စ်တွေထဲက ရိုဟင်ဂျာနဲ.ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းကိုပဲပြောမှာပါ...ကျမ တို.မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ကုလားတင်မက တရုတ်တွေလဲ အများကြီးရှိပါတယ်...ဒါပေမယ့် တရုတ်ဟာ တရုတ်ပါပဲ..တရုတ်က ငါ မြန်မာတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုပါလို. မတောင်းဆိုဘူး..မကြေငြာဘူး။။။ ရှင်းပါတယ်နော်... တရုတ် ကုလား မကလို. ဘယ်သူလာနေနေ အေးအေးချမ်းချမ်းနေ...ဘာမှ မဖြစ်ဘူး...အခု ဖေ့ဘွတ်မှာ ဖြစ်နေတာက မတန်မရာ မြန်မာပြည်မြေပုံမှာပါနေလို.ပြောနေကြတာ...အစက ဆို ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ပုံတောင် အဖယ်ခံထားရတာ...ရှင့် ကရင်ပုံ မပါရင် ရှင်ငြိ်မ်နေမလား..နိုင်ငံတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းမှာ ကိုယ့်အမျိုးကိုယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို.အရေးကြီးပါတယ်.. ရှင် အင်္ဂလန်က ဆိုရင်သိမှာပါ... တခြားကနေဝင်ရောက်လာသူတွေ ခိုလှုံခွင့်ပေးထားတဲ့သူတွေကြောင့် ဘယ်လမ်းပေါ်ကြည့်ကြည့် လူမျိုးခြားတွေ များနေတာပါ...multiculture အရ ကောင်းပေမယ့် ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု.တွေ ပပျောက်လာတာပါ...ဒါကြောင့် ဟိုး လွန်ခဲ့တဲ့ လတုန်းက နယ်မြို.တမြို.က လူတွေက သူတို.မြို.မှာရှိတဲ့ အင်္ဂလ်ိပ် အငွေ.အသက် မပျောက်အောင် ပြုပြင်မှု.တွေ မလုပ်ဖို. အစိုးရကို တောင်းဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်... ဒါက ဥပမာပြောတာပါ..
နိုင်ငံတွင်းမှာ နေထိုင်ခွင့် နဲ. နိုင်ငံ့ လူမျိုးစု အဖြစ် ကြေငြာတာကတော့ တခြားစီပါ..ရှင် လဲ အင်္ဂလန်မှာ နေထိုင်ခွင့်ရထားတဲ့သူဆိုရင် နားလည်မှာပါ...citizenship ရတိုင်း english, scottish, welsh, irish ပါလို. ရှင့်ကိုယ်ရှင် ပြောလို.ရလား ... ဝိုင်းတောင် ရယ်ကြဦးမယ်..
tint November 5, 2011 at 2:40 AM
ကိုယ့်ဆရာတော့ ဘုန်းကြီးကြိမ်လုံးမိမလား ။ လှော်တက်စာထိမလားလို့:P
စစ်ဖြစ် ( ရန်ဖြစ်) တဲ့ အကြောင်းတွေကြည့်ရင်
၂) ကိုယ့် Clan ထိလို့ ချတာ
၃)ကိုယ့်သခင် ကိုယ့်ဘုရင် ကိုယ့်ခေါင်းဆောင်ထိလို့ ချတာ
၄) ကိုယ့်လူမျိုးထိလို့ ချတာ
၅) ကိုယ့်ဘာသာထိလို့ ချတာ
၆) ကိုယ့်နိုင်ငံထိလို့ ချတာ ဆိုပြီး ခေတ်တွေရွေ့ လျောလာလိုက်တာ ။
၇) ခုနောက်ဆုံးတော့ ကမ္ဘာကြီးမှာက အဲတွေခေတ်မမီတော့ဘဲ လူ့ အခွင့်အရေးနဲ့အကြမ်းဖက်တာကာကွယ်ဘို့ချတာ ဆိုတဲ့ခေတ်ကြီးရောက်နေပေါ့ဗျာ ။
ကျွန်တော်တို့ ကတော့ ၁ကနေ ၇ထိ အကုန်ချစရာအကြောင်းတွေ ဖြစ်နေတုန်းပါဘဲဗျာ
Punisher December 21, 2012 at 2:52 AM
ထင်မြင်ချက်လေးသိချင်လို့ မေးတာနော် ။ ကျောက်ပန်းတောင်းမှာချသွားတာက ဘာကိုထိလို့ ချတာလဲ ဟင် ????
mahn ko ko November 5, 2011 at 11:42 PM
အေးဗျာ ၊ ဆရာတင့်ရယ် ဂေါ်ဇီလာတစ်လှည့် ၊ ကင်းကောင်တစ်လှည့် ၊ Zeus ရဲ့အဖေ Titan ကြီး Cronus လိုဟာတွေကို အမြီး လျှောက်ဆွဲနေမိတာ အီဖေကိုယ့်အမှားပါ :-)
ဆရာတင့်ပြောတဲ့ အဆင့် (၇) ဆီကို ရောက်ဖို့ရာကတော့ ရာစုနှစ် မဟုတ်ရင်တောင် ဆယ်စုနှစ်တွေတော့ ကြာဦးမယ် ထင်ပါတယ် ။ ပညာရေးနဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ အများကြီး ပျိုးထောင်ကြရဦးမှာပါ ။ ပြောင်းလဲလာတဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေ တွေအရလည်း နောင်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာ ဖြစ်လာဦးမယ့် အခင်းအကျင်းတွေက ခုအနေထားနဲ့ အတိအကျ တူချင်မှလည်း တူတော့မှာပါ ။ အဲဒီကျရင် ကျနော်တို့လို လူတွေဟာ ရာဇဝင်ထဲမှာ ထားရစ်ခဲ့ရမယ့် လူတွေလည်း ဖြစ်နေကောင်း ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် :-)
ဒါနဲ့ လုပ်ပါဦးဗျ ၊ ဖေ့ဘုတ်လေး ဘာလေး ။ ဆရာ့နဲ့ နာမည်တူက အယောက် ၃၀ မက ရှိတာ ။ ဘယ်အယောက်မှန်း မသိနိုင်အောင်ပါပဲ ။ အနည်းဆုံး ကျနော့်ကို poke လုပ်လိုက်ရင် အခြားလူတွေကို လာချိတ်မှ လက်ခံပေမဲ့ ၊ ဆရာ့ကိုတော့ လာ join ပါ့မယ် ။
စိတ်အေးအေးပါ svမိန်းကလေး ။ ဒီကိစ္စက မနေ့တနေ့ကမှ ပေါ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီး ဘီဘီစီက မြေပုံပေါ်မှာ ထည့်ထားပေးတာလည်း တွေ့မိပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ “မြန်မာပြည်က လူနည်းစု အုပ်စုအချို့” လို့ ဖေါ်ပြထားတာကြောင့် svမိန်းကလေးရဲ့ “မတန်မရာ” ဆိုတာဟာ ကိုယ်ပိုင် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်ဖက် ယိမ်းနေတယ်လို့ ယူဆပါတယ် ။ အကယ်၍ ရိုဟင်ဂျာပြည်နယ်လို့ ပါလာရင်တော့ တစ်နည်းတစ်ဖုံ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
တစ်ဖက်မှာလည်း ကရင်တွေ မပါရင်ကောလို့ ဆွပေးတာမျိုးဟာ ရာစုနှစ်နဲ့ချီပြီး ခံစားခဲ့ရတဲ့ ကျနော်တို့အတွက် စိတ်မလှုပ်ရှားစေပါဘူး (ဒီလို လမ်းလွဲ ပြောဆိုချက်ဟာလည်း critical thinking မှာတော့ red herring fallacy နဲ့ သွားညီမျှနိုင်ပါတယ်) ။ ဘယ်လိုပြောပြော အရေးကိစ္စတွေ အားလုံးဟာ မကြာခင်မှာ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ၊ လူအများက တရားဝင်လို့ လက်ခံမယ့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ လက်ထက်မှာ အပြေအလည် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဆုံးဖြတ်သွားကြရမှာပါ ။
လက်ရှိ အနေအထားမှာတော့ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသူတွေဟာ အမှားကင်းကင်းနဲ့ ပြီးပြည့်စုံသူတွေလို့ မပြောချင်ပါဘူး ။ အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း နိုင်ငံတကာမှာ လူမှုရေး နိုင်ငံရေးနောက်ခံနဲ့ ပညာသင်လာသူတွေကို မေးရင်တော့ အများစုက ယေဘုယျအားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာပြည်သားအဖြစ် လက်ခံတယ်လို့ ပြောကြမှာပါ ။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သား အတော်များများကတော့ လက်တွေ့အခြေနေကို ရင်ဆိုင်ကြဖို့ အဆင်သင့် မဖြစ်ကြသေးဘူး လို့လည်း နားလည်ရပါတယ် ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ၊ အချုပ်ပြောရရင် အပေါ်က ပြောခဲ့သလို အကြေအလည် ပြောဆို ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းစရာတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတာမို့ အချိန်ယူ ကြရအောင်လို့ အဆိုပြုချင်ပါတယ် ။ တစ်ခုရှိတာက ခုချိန်မှာ အဓိကကျတာ မဟုတ်ပေမဲ့ လူအများရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေ သေချာပေါက်ရနိုင်တဲ့ ကိစ္စတစ်ရပ် ပေါ်လာတာဟာ သွေးရိုးသားရိုး ဟုတ်မဟုတ် ထည့်တွက်ဖို့လည်း လိုပါလိမ့်မယ် ။
svမိန်းကလေး အနေနဲ့ သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်ဟာ သြစတြေးလျမှာ ရောက်ရှိနေသူ တစ်ယောက်ပါ ။ ၈၈ မှာ မပြီးခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ် ပညာရေးကို ပြန်ဆက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ သက်ကြီးကျောင်းသား တစ်ယောက်လို့ ဆိုကြပါစို့ ။ ဒါပေမဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး စိတ်ကိုဖွင့်ထားတာမို့ ၊ အချက်အလက် ကျကျနဲ့ ပြောဆိုထောက်ပြ ဆွေးနွေးတာတွေကို ဘယ်သူ့ဆီကမဆို လက်ခံဖို့ အသင့်ပါ ။ အခု ပြောနေတာတွေဟာလည်း စိတ်ဆိုးလို့ ပြောနေတာတွေ မဟုတ်သလို svမိန်းကလေး အနေနဲ့လည်း ကျိုးကြောင်းသင့်တဲ့ အပိုင်းတွေကို လက်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။
mahn ko ko November 5, 2011 at 11:53 PM
ကဗျာသမား တစ်ယောက် မဟုတ်ပေမဲ့ စိတ်ထဲက ထွက်လာတာတွေကို စီကုံးချရေးပြီး facebook မှာ တင်ထားမိခဲ့တဲ့ စာစုတစ်စုကို အမှတ်တရ ထည့်ထားလိုက်ပါတယ် ။ စာပေ ပေတံတွေနဲ့တော့ တိုင်းတာလို့ မရနိုင်ကောင်းပါဘူး ။ အမှတ်တရ ဆိုတဲ့အတိုင်း ကျနော့်အတွက် အမှတ်တရရယ်လို့ပဲ အဓိပ္ပါယ်လို့ပဲ ဆောင်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
** လေဟာနယ်ထဲ လွင့်ပျံဝဲတဲ့ .. သူငယ်ချင်းသို့ ...
ငါအမှန်တွေ ပြောနေရင် ဝမ်းသာလိုက်စမ်းပါ ။
အဲဒါတွေ ရပ်သွားတဲ့တစ်နေ့ မင်းကို ငါလိမ်မိလိမ့်မယ် ။
မင်းကို ငါချစ်တာမဟုတ်ဖူး ၊ မေတ္တာထားတာ ။
မင်းကို သနားတာမဟုတ်ဘူး ၊ မင်းကို စာနာတာ ။
မင်းကို ပေးစရာ ငွေကြေးမရှိဘူး ၊ ငါသိတာကိုသာ မျှယူသွားပါ ။
မင်းဆီက ဘာမှမလိုချင်ဘူး ။
လိုချင်တာရှိရင်တော့ လမ်းညွှန်ပေးဖို့ မေးစမ်းပါ ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ မင်းကို ငါမပြောင်းလဲပစ်နိုင်ဖူး ။
ငါ့ကိုယ်ကိုသာ ပိုင်တာမို့ ၊ ငါပဲပြောင်းပါ့မယ် ။
မင်းမုန်းတဲ့သူရဲ့ နှလုံးသားထဲကို ၊ ငါ့ဓါးနဲ့ မစိုက်ပါရစေနဲ့ ။
မင်းရန်သူကို ငါရေတိုက်တဲ့အခါ ၊ ငါ့ကို ရန်သူလို့ မထင်ပါနဲ့ ။
ဓါးခင်းလမ်း မလျှောက်လှမ်းဖို့ တားတဲ့အခါ ၊ ငါ့ကို သစ္စာဖေါက်လို့ မသမုတ်ပါနဲ့ ။
မင်းကို ငါမသိပါဘူး ၊ မမြင်ဖူးပါဘူး ၊ စကားလည်း မပြောဖူးပါဘူး ။
မင်းဟာ အရှင်သခင်ပါ ၊
မင်းဟာ စွမ်းအားရှင်ပါ ၊
မင်းဟာ အတိုင်းအဆမဲ့ ရွက်လွင့်နိုင်သူပါ ။
လောကကြီးထဲ တို့တတွေဟာ ..
ပြဿနာတစ်ခုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းလည်း ဖြစ်နိုင်တယ် ။
အဖြေတွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ် ။
ရွေးချယ်မှုကတော့ မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင် ရပိုင်ခွင့် ရတနာပေါ့ ။
မနက်ဖြန်လည်း နေထွက်ဦးမှာပါ ။
တို့တတွေ နိုးထလာကြတဲ့အခါ ...
ပြည့်လျှံနေတဲ့ မျက်လုံးအိမ်တွေနဲ့ မနိုးထပါရစေနဲ့ ။
လစ်ဟာနေတဲ့ ဝမ်းပိုက်တွေနဲ့ မကြုံပါရစေနဲ့ ။
သည်းခြေပျက်စေမဲ့ အာရုံတွေကြား လူးလဲထမရပ်ရပါစေနဲ့ ။
အလင်းရောင် မလာခင်လည်း အိပ်မက်ဆိုးနဲ့ မနိုးရပါရစေနဲ့ ။
အခု .. မင်းရှိတဲ့
အဆုံးစမဲ့ ဘဝမီးကန္တာရပေါ် ငါရောက်လာခဲ့ပြီ ။
ယောင်ရမ်းအိပ်မက်ခဲ့မိတယ် သူငယ်ချင်း ။ ။ ။
(၃၁ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၁)
yehtut June 14, 2012 at 3:05 AM
I really like that,especially မင်းမုန်းတဲ့သူရဲ့ နှလုံးသားထဲကို ၊ ငါ့ဓါးနဲ့ မစိုက်ပါရစေနဲ့ ။
ဓါးခင်းလမ်း မလျှောက်လှမ်းဖို့ တားတဲ့အခါ ၊ ငါ့ကို သစ္စာဖေါက်လို့ မသမုတ်ပါနဲ့ ။ let me share please.
မန်းကိုကို June 14, 2012 at 7:54 AM
tint November 6, 2011 at 10:48 AM
ကျွန်တော့မှာ facebook account မရှိဘူးဗျ ။
ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်နေတာတွေကတော့ပန်းစကား ကျော်ဟိန်းပါဘဲဗျာ ။
ဒါကို ဘယ်လိုရှင်းရမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်လဲ မသိပါဗျာ ။
ခေတ်သစ်လူငယ် November 6, 2011 at 9:52 PM
ဦးမန်းကိုကို ရေးထားတဲ့ အယူအဆ အားလုံးကို အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါတယ်။
Anonymous November 7, 2011 at 2:02 AM
မန်းကိုကို November 7, 2011 at 10:22 PM
ဒီမိုတွေ ဒေါ်လာစားတွေ ၊
စစ်ခွေး စစ်ကျွန်တွေ ၊
ဧရာဝတီအတွက် ပြောသူတွေကို ဧရာဝတီသမားတွေ ၊
သံလွင်အတွက် တောင်းဆိုရင် သံလွင်သမားတွေ ၊
ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းအတွက်ဆို ထားဝယ်သမားတွေလို့ ရောပြီး သမုတ်ကြလေမလားပဲ ။
Anonymous အနေနဲ့ လူရှေ့ ထွက်မရပ်ရဲတာကို အကြောင်းတစ်ခုခု ရှိလိမ့်မယ်လို့ နားလည်ပေးပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်ကတော့ “လူအခွင့်အရေး” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစည်းနောက်မှာ အကာအကွယ် ယူထားသူတစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး ။ “စာနာမှု” ကို ရှေ့တန်းတင်ပြသူ တစ်ဦးသာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Anonymous ရည်ညွှန်းထားတဲ့ ကိုချိုတူးဇော်ကို လေးစားပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကျိုးသင့်ကြောင်းသင့် ခိုင်မာတဲ့ အချက်အလက်တွေသုံးပြီး အဆိုပြု တင်ပြတာမျိုးကိုပဲ မျှော်လင့်ပါတယ် ။ ဘီဘီစီမှာ ပါလာတာကို လိုချင်သလိုတွေးပြီး အထင် လွဲရုံလောက်နဲ့တော့ သဲသဲလှုပ် မဖြစ်သင့်ပါဘူး ။
ဒီထက်မက ကိုယ်တွေကြောင့် ထွက်ပေါက်ရှာသူတွေကိုလည်း ထပ်ဆင့် အပြစ်တင်ပြီး ပြဿနာကို ထပ်ချဲ့တာမျိုးဟာ အကျိုး မဖြစ်စေပါဘူး ။ ပူပူလောင်လောင် အော်ဟစ်စရာ မလိုပဲနဲ့ လက်တွေ့ကျကျ ဘယ်သူမှ မရှူံးတဲ့ ဖြေရှင်းလို့ ရမယ့်နည်းလမ်းတွေ တွေးကြံကြရင် နတ်လူ သာဓုခေါ်မှာပါ ။
အားပေးတာ ဝမ်းသာပါတယ် ။ ချပြထားတဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို ဝေဖန် အကြံပြုဖို့လည်း အားပေးချင်ပါတယ် ။
နောက်တာလား ဆရာရယ် ၊ ဂြိုလ်တုခေတ်ကြီးမှာ :-)
ဖြစ်နေတာတွေက ကျနော့်အမြင်မှာတော့ ဖြေရှင်းလို့ ရပါတယ် ဆရာရယ် ။ လတ်တလောတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ ။ ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီး အချိန်တော့ ယူကြရပါလိမ့်မယ် ။ ခုနေမှာတော့ ကျနော့်လို အစတေးခံရမယ့် လူတွေ လိုတာပေါ့ ဆရာရယ် ။ စကားပုံများတောင် ရှိတယ်မို့လား “ခုရေတွင်းတူး ခုဗွက်ရေသောက်”ဆိုလား .. :-)
Nge Naing November 9, 2011 at 8:45 PM
မြန်မာပြည်မှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်ခံနေရတာ ဘင်္ဂလားက ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေမှ မဟုတ်ဘူး အားလုံးက တမျိုးစီ ခံနေရတဲ့သူတွေသူတွေချည်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကို လူ့အခွင့်အရေး ပြဿနာလုိ့ ကျွန်မ လုံးဝမယူဆဘူး။ ဒေါသနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ ဘာတခုမှ အဖြေမှန်မရနိုင်လို့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါသချောင်းချောင်း ထွက်နေသူတွေကို ဘ၀င်မကျပေမဲ့ အများစု ပေါက်ကွဲနေကြတာက ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ခိုးဝင်ပြီး မြန်မာပြည်ထဲ ရောက်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ သူများအိမ်ကို ကိုယ့်အိမ်လုပ်ချင်တဲ့ ပြဿနာကြောင့်လို့ ကျွန်မနားလည်တယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေ အခုတောင်းဆိုနေတာ နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေလို့ ဒုက္ခရောက်နေလို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ အသက်မွေး နေထိုင်ခွင့် ဆိုတဲ့ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေး ရဖို့တောင်းဆိုနေတာ မဟုတ်ဘူး သူများနိုင်ငံကို ခိုးဝင်လာကာ သမိုင်းကို လိမ်လည်လုပ်ကြံပြီး နေရာဝင်ယူချင်နေလို့ ပြဿနာက ကြီးလာတာပါ။ ဒါကို ဘယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကမှ လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုမန်းကိုကိုတို့ အခုရေးထားတာ လူ့အခွင့်အရေး ရှုဒေါင့်ကနေ ရေးထားတာ ဖြစ်ပေမဲ့ ကျွန်မလည်း Human Right Defender တယောက်အနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ လူသားတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးပဲ ရနိုင်ပါတယ်။ သူတို့တောင်းဆိုနေတဲ့ လူမျိုးတခုရဲ့ အခွင့်အရေးတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုမှ မရနိုင်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာမှ မဟုတ်ဘူး တခြား ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ ဒီလို မရနိုင်ပါဘူး။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဒီနေရာမှာ အလွဲသုံးစားလုပ်လို့ မရပါဘူး။ အကောင်းဆုံး ဥပမာအနေနဲ့ Burma Strange ဟာသလုပ်ပြီး ရေးထားတဲ့ ပို့စ်လေးကို သွားဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ http://www.burmastrangenews.com/2011/11/blog-post.html ကျွန်မတော်တော်သဘောကျတယ်၊ ဟာသလည်းဖြစ် ပေးထားတဲ့ ဥပမာကလည်း ကွက်တိပဲ။ ကိုမန်းကိုကို သွားဖတ်ကြည့်ပါ။
(မှတ်ချက် - ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းကလွဲရင် တခြားအကြောင်း မဖတ်ဖြစ်ဘူး။ လုံးဝမအားတဲ့ကြားက လာဖတ်ပြီး မှတ်ချက်ပေးသွားတာ ဖြစ်တယ်)
ကျော်ထင် November 10, 2011 at 12:02 AM
ကွန်မန့် ၀င်မရေးဖြစ်တာကြာပေမယ့် လာလာတော့ ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ဘယ်လောက် များများ အချိန်ရရင် ရသလောက်တော့ အင်တာနက်ပေါ် သတင်းပေါင်းစုံ လိုက်လံ ဖတ်ရှုဖြစ်ပါရဲ့။ Burmese netizen တွေရဲ့ ဘီဘီစီတိုက်ပွဲ.. ဒေါ်စုခလုတ်တိုက်ပွဲတွေလဲ မြင်ပါ့ဗျာ။ ဘီဘီစီကို ဘာတွေ အော်နေကြလဲ သိချင်လို့ အဲဒီမြေပုံကြီးနဲ့ သတင်းလဲဖတ်ကြည့်သေးသဗျ။ ကိုယ်ပဲ မျိုးချစ်စိတ် ပါးနေလို့လားမသိဘူး ဘာကိုအပြစ်မြင်ရမယ် နားသိပ်မလည်ဘူး။ ဒါပေမယ့်လဲ မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်တယ် ဆိုသူတွေ ဆရာမန်းပြောသလို ကြောင်းကျိုးဆီလျော်စွာ ပြောတတ်ကြရင် ပိုကောင်းမယ်လို့တော့ ထင်မိတယ်။ရဲရဲတောက် စကားလုံးတွေနဲ့ မာန်အပြည့်နဲ့ ဆဲဆိုကန့်ကွက်နေကြပေမယ့် မူရင်းဆောင်းပါး အကြောင်းအရာနဲ့ ကန့်ကွက်နေကြတဲ့ အကြောင်းအရင်း နဲနဲဟနေသလိုပဲဗျ။ စကားမစပ် အချွန်နဲ့ မကြည့်အုံးမယ်။ မှတ်ပုံတင်ရေး မတင်ရေး ဆရာမန်းက ဘယ်ဖက်လဲဗျ။
ကျော်ထင် November 10, 2011 at 12:22 AM
My rare comment after suchalong time disappeared Sayar Mhan. Appreciate you could check it back in the spam folder.
Thu November 10, 2011 at 2:07 PM
Ko Mahn Ko Ko, Thanks for fully explanation.
Let's say somethings, ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ခိုးဝင်ပြီး, most peoples thought same thing.
I learned from some discussion of early history, Rohigyar were servant status of Arakan kings, captured and sold to Java islands.
After Arakan dynasty, much populations involve and dispute with homeland ethnic.
I do accept with “စာနာမှု”, that might be came from staying in Arakan or Ausi.
(To against the discrimination is loud chorus of immigrants in Ausi)
Ko Aung San was saluted as "Humanism Chair" by Dr. Ba Maw in Univ. Union debates around 1935s.
Later, he became Gen Aung San and had been accused by British government for given severe verdict toabad reputed head man in Moulmein district during early Japan invasion. But rulers taken withdrawal on it.
Noble prize laureate, president Obama commanded the raid of Osama for justice.
Both two define between the ideology and responsibility.
We need to see the fruitful facts and all aspects.
An Asian Tour Operator November 10, 2011 at 2:39 PM
ဗျို့ ပဒို။ အစ်မငယ်နိုင် ရဲ့ မှတ်ချက် ကတော့ အင်မတန် မျှတ ပေတာပဲဗျ။ မှတ်ချက် အောက် က မှတ်ချက် ကို သာ တောင် သဘောကျသေး။ :))
မန်းကိုကို November 10, 2011 at 9:43 PM
Datuk Thomas Chon ဒါတွတ်သောမတ်စ်ချွန် နဲ့ ဆရာကျော်ထင်ချွန် :-)
စာတော့ ရေးချင်တယ်ဗျာ ၊ မနက် ၇ နာရီကထွက် ၊ ကျောင်းက ၆ နာရီခွဲလောက်မှ ပြန်ရောက် ၊ ဟိုဟိုသည်သည်လုပ်ပြီး ထမင်းစားလိုက်တာ အိပ်တောင်ငိုက်လာပြီဗျာ ။ အိမ်စာတွေလည်း မလုပ်ရသေးတာမို့ နောက်နေ့တွေကျမှ စာပြန်ရေးပါရစေ ။
အားလုံးကို အားလည်းနာတယ် ၊ မျက်လုံးလည်း ဖွင့်လို့ သိပ်မရတော့ဘူး ၊ ရေလည်း မချိုးရသေးဘူး ၊ အိမ်စာအတွက်လည်း စိတ်ပူနေတယ် ၊ မနက်ကျရင်လည်း အစောကြီးထရမယ် ၊ ကျောင်းမှာလည်း အတန်းသစ် ပြောင်းတက်မှာမို့ စိတ်က မြောက်လိုခုန်နေတယ် ၊ နက်ဖြန် အတန်းထဲမှာလည်း tutorial ဖြေရဖို့က ရှိသေးတယ် ၊ အဝတ်စိမ်ထားတာလည်း မလျှော်ရသေးဘူး ... တော်ပြီ အိပ်ပြီဗျာ .. :-)
မန်းကိုကို November 13, 2011 at 1:23 AM
အေးဗျာ .. စာပြန်မယ်လုပ်တော့ ဘယ်ကနေ စရေးရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး ။ ကျောင်းစာနဲ့ မိသားစု ကိစ္စတွေ အပါအဝင် လုပ်ချင်တာ ၊ လုပ်ကို လုပ်ရမှာ ၊ လုပ်သင့်တာ ၊ လုပ်လို့ ရနိုင်တာတွေက လူကို ဘောင်ခတ်ထားသလို ဖြစ်နေတယ် ။
@ An Asian Tour Operator
ဒါတွတ် လာပြောမှ ဘီဘီစီက ရိုဟင်ဂျာသတင်းကို နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ဖတ်ဖြစ်ပြီး အရင်က မမြင်မိတာတွေ ခုမှနည်းနည်း မြင်လာတော့တယ် ။ အောက်က မှတ်ချက်ဆိုတာက ဘယ်သူ့ကို ပြောတာလဲဗျ ၊ ကိုကျော်ထင်ရော Thu ပါ ကောင်းအောင် ရေးသွားကြတာချည်းပါပဲ ။ ပြီးရင် ဆရာ့ကို ကျနော် Datuk လို့ ခေါ်တာကို သတိထားဦး ။ တော်ကြာ စူလတန်တွေ သူကောင်းပြုတဲ့ Datuk ဘွဲ့ရထားသူ မွတ်ဆလင်ပါဆိုပြီး အထင်လွဲ ဝိုင်းဆဲတာ ခံနေရဦးမယ် :-)
သိလာရတဲ့ သမိုင်းအချက် အလက်တွေကြောင့် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လက်ခံလာတာမျိုး ခုထိ Thu တစ်ယောက်ကိုပဲ တွေ့မိပါသေးတယ် ။ မာနနဲ့ အစွဲတွေကို ဆုပ်ကိုင်မထားပဲ ၊ စိတ်ကို အရှင်ဖွင့်ထားလို့သာ ဒီလို သဘောထား လာနိုင်တာလို့ ယူဆမိပါတယ် ။
အခု ရိုဟင်ဂျာကိစ္စဟာ သမိုင်းကို အခြေပြုပြီး မျှတတဲ့ ဥပဒေနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ် ။ ဒါ့ပြင် တိုင်းရင်းသားလို့ သတ်မှတ်နိုင်မယ့်သူတွေ ၊ နိုင်ငံသားလို့ သတ်မှတ်နိုင်မယ့် သူတွေအပြင် ဟိုမရောက် သည်မရောက် (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံခြားသားလို့ သတ်မှတ်လို့ ရနိုင်သူတွေလည်း ရှိမှာပါ ။ ဘာလို့ ဒီလိုပြောသလဲဆိုတာ မငယ်နိုင်ကို စာပြန်တဲ့အပိုင်းမှာ နည်းနည်း ထည့်ရေးပေးပါ့မယ် ။
ဒီနေရာမှာ naturalised citizens လို့ သတ်မှတ်လို့ ဖြစ်နိုင်မယ့် ၊ နိုင်ငံခြားသား မိဘနှစ်ပါးကနေ ပြည်တွင်းမှာ မွေးဖွား ကြီးပြင်းလာသူ မျိုးဆက်တွေရဲ့ အပိုင်းလည်း ထည့်တွက်စရာ လိုလာပါမယ် ။ အဲဒီအခါကျ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံအနေနဲ့လည်း ဥပဒေကြောင်းအရ ၊ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းအရ ထပ်တူ တာဝန်ရှိလာပါလိမ့်မယ် ။
Thu ပြောတဲ့ ၊ “စာနာမှု”ကို သြစတြေးလျကနေ ရလာတာ ဆိုတာကတော့ အတော်အသင့် မှန်ပါတယ် ။ ဒီမှာလည်း လူအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ် ။ လူမျိုးရေး ခွဲခြားသူတွေလည်း အသင့်တင့်ရှိပေမဲ့ ၊ ကိုယ်က ကောင်းတာလေးတွေကို မြင်ကြည့်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့ ယှဉ်တွဲခံယူလာတာလို့ ပြောနိုင်ပါတယ် ။
မြန်မာပြည်နဲ့ အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံတွေမှာ လှည့်လည် နေထိုင်စဉ်တုန်းက ကိုယ့်ဘာသာ အကောင်းမြင်တတ်သူလို့ ခံယူထားခဲ့ပေမဲ့ ၊ ဒီကိုရောက်တော့ အရင်က တစ်ခါမှ မတွေ့ကြုံခဲ့ရဖူးတဲ့ လူလူချင်း ဘယ်လို စာနာရမယ် ၊ ကူညီဖေးမ ရမလဲ ဆိုတာတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်လာ ခံယူရရှိ လာခဲ့ရတယ် ။
မတူတဲ့ စိတ်ရင်းခံ ၊ ဘာသာရေး ၊ အတွေးအခါ် ၊ နိုင်ငံရေးအပါဝင် အယူဆအမျိုးမျိုး ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ၊ ပေါင်းဆုံမှု အဖုံဖုံနဲ့ နားလည်ပေးမှုတွေကို ကြုံလာရတဲ့ အခါမှာ သင်္ခန်းစာ ယူစရာတွေ အများကြီး တွေ့လာရပြန်တယ် ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မိသားစုအတွင်းမှာရော ဘဝမှာပါ အရိုးစွဲနေတာတွေကို ပြင်ဖို့ ကြိုးစားနေဆဲပါ ။ ဒါကြောင့် သတိလွတ် သွားတဲ့အခါနဲ့ အတွေးတိမ်တဲ့ အခါတွေကလွဲရင် ၊ အတတ်နိုင်ဆုံး အလယ်အလတ်ကျအောင် တွေးတော ရေးပြောနေတာပါပဲ ။
Thu ပြောတဲ့ ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ကိစ္စက မွန်ပြည်နယ်တွင်း သထုံမြို့နားက ရွာမှာဖြစ်ခဲ့တာပါ ။ ပြဿနာက သူကိုယ်တိုင် ကိုယ်ထိလက်ရောက် စီရင်ခဲ့တာကြောင့်ပါ ။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝေဖန်ချက် မပေးလိုပေမဲ့ ၊ နောင် မြန်မာပြည် ပညာရေး ပြန်ထွန်းကားလာပြီး စိတ်ဓါတ်တွေ မျှမျှတတ ထားနိုင်လာတဲ့အခါကျ တက္ကသိုလ်တွေမှာ debate အသေးလေးတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
ဟုတ်တယ် ကိုကျော်ထင်ရေ ၊ ခုလည်း ဧရာဝတီ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေပြန်ပြီ ။ ကြာရင် war on everything ပဲ ဖြစ်တော့မယ် ထင်ပါတယ် ။
ဘီဘီစီ သတင်းကို ပြန်ကြည့်တော့ ၊ ဟုတ်သလောက်တော့လည်း ဟုတ်ပါတယ် ။ ရိုဟင်ဂျာကို လူနည်းစုလူမျိုးစု တစ်စုပုံစံ တင်ပြထားသလို ဖြစ်နေတာကိုး ။ ဒါပေမဲ့ ဆဲနေကြသူတွေ အားလုံးလိုလိုဟာ အချက်လက်နဲ့ တင်ပြတာတွေကို လက်မခံဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီး သူတွေပါ ။ ဘာပြောပြော သိပ်ထူးလှမယ် မထင်ပါဘူး ။ မြန်မာပြည်မှာ ဘာသာရေး ၊ လူမျိုးရေးတွေကစပြီး ဘာအရေးမှ သည်းမခံတဲ့ အလေ့က နက်နက်နဲနဲ အမြစ်တွယ်လို့ နေခဲ့ပါပြီ ။ ကိုကျော်ထင်ဆီမှာ ဖေ့ဘွတ်အကောင့်ရှိရင် ကျနော့်ဆီမှာ တခြားက share ထားတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တောင် ရှိသေးတယ် ၊ ဖတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ် ။
မှတ်ပုံတင်ရေး မတင်ရေးမှာတော့ ကျနော်က ဘယ်ဖက်ကမှ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ။ ဒါပေမဲ့ ဘေးအမြင်နဲ့ တွေးမိတာတွေတော့ နည်းနည်းရှိတာပေါ့ ။
(၁) ဒေါ်စုနဲ့ NLD မှာ ပြည်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးဖို့ရာ ရွေးစရာ လမ်းသိပ်မရှိဘူး ။
(၂) ဒေါ်စုအနေနဲ့ NLD အနေနဲ့ သိက္ခာနဲ့ ထောက်ခံမှု အချို့ကို စွန့်လွတ်ပြီး လွတ်တော်ထဲ ဝင်လိမ့်မယ် ၊ ဝင်ရလိမ့်မယ်လို့ ယူဆတယ် ။
(၃) အခု ဖြစ်နေတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုက ၊ ဦးသိန်းစိန်တို့ဖက်က ဘယ်လောက်အထိ လျှော့မလဲနဲ့ ဒေါ်စုနဲ့ အပေါင်းအပါတွေက ဘယ်အထိ လျှော့ပေးဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်သလဲ ဆိုတာလို့ မြင်မိတယ် ။
တိုလီမိုလီတွေ လျှောက်တွေး လျှောက်ပြောရင်တော့ အများကြီးပါပဲဗျာ ။ အတိုချုပ်ကတော့ ဒေါ်စုနဲ့ NLD က ဘယ်လောက် အိနြေ္ဒရရ (ဆင်ခြေလှမ်း လှမ်းသလို) ခင်းထားပေးတဲ့လမ်းကို အကောင်းဆုံး လျှောက်သွားနိုင်မလဲ ဆိုတာကိုပဲ ဝိုင်းဆုတောင်းပေးကြရမယ့် အနေထားလို့ ထင်ပါတယ် ။ ပေးဆပ်မှု ၊ စွန်လွတ်မှုတွေ အများကြီး ရှိလာမှာပါ ။ ကျနော့် သဘောထား အတော်များများလည်း “သပြေညိုလမ်းအခွဲမှာ ဝမ်းနည်းမှာလား” ထဲမှာ ရေးထားသလိုပါပဲ ။
မန်းကိုကို November 13, 2011 at 2:08 AM
မငယ်နိုင်စိတ်ထဲ ဘယ်လိုရှိနိုင်တာ ကျနော် နားလည်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ် ။
အဓိက တစ်ချက်ကတော့ မြန်မာပြည် (အထူးသဖြင့် ခုကိစ္စမှာ ရခိုင်ပြည်) မှာ မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင်တွေ ရှိမရှိနဲ့လည်း အများကြီး ဆိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
အပေါ်မှာ Thu ပြောခဲ့သလိုပဲ ၊ ခံစားမှုနည်းတဲ့ အချက်လက် နောက်ခံနဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေကို ဖတ်မိလာရင် နကိုခံယူထားတာတွေ အသင့်အတင့် အပြောင်းလဲ ရှိနိုင်ပါတယ် ။
ကျနော် မပြောဖြစ်ခဲ့တာ အချို့ ရှိပါသေးတယ် ။ မလေးရှားမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့စဉ်က ရခိုင်မွတ်ဆလင် (ကျောင်းဆရာဟောင်း) တစ်ဦးနဲ့အတူ လုပ်ငန်းခွင် တစ်ခုထဲမှာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ဂဃနဏ မမေးခဲ့မိတာနဲ့ ၊ ကြားခဲ့သမျှတွေအတွက် မှတ်ဥာဏ်လည်း refresh သိပ်မလုပ်နိုင်ပေမဲ့ သေချာတာ အချို့တော့ ရှိပါတယ် ။
ခြုံပြောရရင်တော့ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာ ၊ အသံလွင့်ချက် ၊ ကျောင်းစာ ၊ စာအုပ်စာပေနဲ့ ကိုယ်တွေ့တွေအရ ရခိုင်မှာ မဟာမေဒင် လို့ခေါ်မယ့် မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင်တွေ အစဉ်အဆက် ရှိနေခဲ့ပါတယ် ။ အခုကိစ္စမှာက ရာစုနှစ်နဲ့ချီ နေထိုင်လာခဲ့လို့ ဥပဒေအရ တိုင်းရင်းသားလို့ သတ်မှတ်လို့ ရနိုင်မယ့်သူ ၊ ဗြိတိသျှလက်ထက်မှာ ဝင်လာလို့ နိုင်ငံသားလို့ သတ်မှတ်နိုင်သူနဲ့ ကနေ့အချိန်မှာ ရှိနေတဲ့ ၇ သိန်းနဲ့ တစ်သန်းကျော်ကြား ရှိတဲ့ အရေအတွက်မှာ ၊ ကြားညှပ် ဝင်လာသူတွေ ရှိမရှိဆိုတာကသာ ဖြေရှင်းစရာလို့ ထင်ပါတယ် ။ မွတ်ဆလင် ကျောင်းဆရာ အဆိုအရ ၊ အရင်လူတွေ ရှိသလို ၊ နောက်မှရောက်သူတွေလည်း ရှိတယ်လို့ နားလည်ရပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အရင်မောင်းထုတ် ထားခဲ့သူတွေ ပြန်ဝင်လာတာလား ဆိုတာတော့ မသဲကွဲပါ ။
ထည့်တွက်စရာ တစ်ခုကတော့ ၁၉၇၈ မှာ စစ်ဆင်ရေးတွေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ကို မောင်းထုတ်ခဲ့ရာမှာ ကုလသမဂ္ဂ ဝင်လာပြီး ခိုလှုံရေး စခန်းတွေ ဖွင့်ပေးခဲ့တာကိုပါ ။ ကုလသမဂ္ဂတောင် ဝင်လာပြီဆိုမှ ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ရှေ့တန်းတင် ပြောဆိုကြရင် ကမ္ဘာသိ အရှက်ကွဲကြရဖို့ များပါတယ် ။ နောက်ပြီး နကိုက နိုင်ငံခြားသားဆိုရင် သိန်းနဲ့ချီပြီး ဘာလို့ ပြန်လက်ခံခဲ့တာလဲ ၊ ဒီကိစ္စဟာ မာန်ကြီးတဲ့ ရခိုင်တွေကို ပြဿနာပေးထားတာ ၊ ရိုဟင်ဂျာတွေ အိမ်ထောင်မပြုရအောင် တားမြစ်တာ စသည်ဖြင့် မေးခွန်းတွေ ၊ အဆိုပြုချက်တွေ ၊ သတင်းတွေဟာလည်း ထည့်စဉ်းစားစရာပါ ။
မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် Martin Smith ရဲ့စာတွေကို အလေးထားကြတယ်လို့ သိရပါတယ် ။ သူ့စာတန်းတစ်ပိုင်းကို လင့်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ သဘောတူရမယ်လို့တော့ မဆိုလိုပါဘူး ။
သတင်းနဲ့ စာနယ်ဇင်းဖက်မှာတော့ Bertil Lintner ရေးတာတွေကို အလေးထားဖို့ လိုနိုင်ပါတယ် ။ သူ့ဆောင်းပါးတစ်ခုမှာ ရိုဟင်ဂျာ လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရေးထားတာ နည်းနည်းရှိပါတယ် ။ အဆိုးဖက်က ကြည့်လို့ရနိုင်သလို ၊ အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း ရွေးစရာ လမ်းမရှိသူတွေရဲ့ ထွက်ပေါက်ရှာရတာလို့ တွေးလို့ရတာတွေ ပါပါတယ် ။ အဲဒီလို ထွက်ပေါက်မရှိအောင် ကျနော်တို့တွေက တာဝန်ရှိတယ် ဆိုရင်တော့ ၊ သူတို့ကို အပြစ်တင်စောလို့ မလွယ်ပြန်ပါဘူး ။ နိုင်ငံပိုင် သတင်းတွေအရ ငယ်စဉ်က သိခဲ့ရတာက မူဂျာဟစ် သူပုန်တွေ ရှိခဲ့ပြီး အရေတွက် ၁၀၀ နဲ့ ၂၀၀ ကြားပဲ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
အခြား ဆောင်းပါးတွေလည်း အများကြီးပါပဲ ။ များလွန်းမှာစိုးလို့ လင့်တွေ မထည့်တော့ပါဘူး ။ ဆောင်းပါးတင် မဟုတ်ပဲ ၊ အောက်မှာပါတဲ့ အချို့ ဆွေးနွေးချက်တွေမှာ မှတ်သားစရာ အချို့ကိုလည်း တွေ့နိုင်ပါသေးတယ် ။ ကျနော်လည်း အကုန်လုံး လိုက်မဖတ်နိုင်သလို မငယ်နိုင်လည်း တတ်နိုင်မယ်တော့ မထင်ပါဘူး ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်ကတော့ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို ၊ သမိုင်းနောက်ခံနဲ့ မျှတတဲ့ ဥပဒေကြောင်းသုံးပြီး ဆုံးဖြတ် လုပ်ကိုင်သွားကြဖို့ပဲ မျှော်လင့်မိပါတယ် ။
မန်းကိုကို November 13, 2011 at 11:40 AM
facebook က Freedom Burma group မှာ အဖွဲ့ဝင် ၂၈,၅၀၀ ကျော် ရှိပြီး invite အလုပ်ခံရလို့ ဝင်ခဲ့မိတယ် ။ ရေသာများပြီး ငါးမရှိလှတဲ့ အဖွဲ့ထဲကထွက်ဖို့ နှုတ်ဆက်တဲ့အခါ အကျိုးဗဟုသုတ ပေးနိုင်တဲ့စာတွေကို စိတ်မဝင်စားခဲ့တဲ့ အဖွဲ့သားအချို့ရဲ့ ဝိုင်းသြဘာပေးတာကို မှတ်တမ်းတင် ထားလိုက်တာပါ ။
အားလုံးပဲ နှုတ်ဆက်ပါတယ် ။
လုပ်စရာ scope နည်းနည်းကျဉ်းသွားအောင် အဖွဲ့ထဲက နှုတ်ထွက်တော့မှာပါ ။
ဝါဒဖြန့်ဖို့ နာမည်တု ပုံတုနဲ့ ဝင်ပြောနေသူတွေ ၊
တိုင်းရင်းသားတွေကို မုန်းသူ/ဒုတိယတန်းစား နိုင်ငံသားတွေလို့ ထင်နေသူ ၊
မတူတဲ့အမြင် လက်ခံဖို့ခက်သူတွေနဲ့ ၊
အချို့အချို့သော ဂုဏ်ပုဒ်တွေ မတပ်ချင်တော့သူတွေအတွက်တော့ ဝမ်းသာစရာ ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ။
ပါရမီ ဖြည့်ပေးတယ်လို့ပဲ သဘောထားပါတယ် ။
ပျော်ရွှင်နေနိုင်ကြဖို့ မျှော်လင့်လျက် ...
ဟုတ်ကဲ့ဗျာ ရိုဟင်ဂျာဘက်တော်သားကြီးကို​ နှုတ်ဆတ်ပါတယ် ဗျား ဟားဟား လူသားချင်းစာနာမှုဆိုတဲ့ဟာနဲ့​ ကိုင်ပေါက်ပီး နိုင်ငံလူမျိုး ဘာသာတစ်ခုလုံး သူများဝါးမျို​မှာ ထိုင်ကြည့်နေလောက်အောင် ကျုပ်တို့သဘောမကောင်းနိုင်ဘူး ရှေးရှေးကလက်ခံထားလို့သာ ခင်ဗျားတို့လို လူမျိုးခြားတွေ မြန်မာလိုကောင်းကောင်းသိပီး​ မြန်မာနောက်ကျော ကိုဓါးနဲ့ထိုးနိုင်ကျတာပေါ့​ ဟုတ်လား ၊ကျနော့်ကိုမျက်ကန်းမျိုးချ​စ်လို့ ခင်ဗျားသတ်မှတ်လို့ရတယ် အယူဝါဒကျဉ်းမြောင်းသူလို့လည်း သတ်မှတ်လို့ရတယ် နိုင်ငံအရေး လူမျိုးအရေး နဲ့ပါတ်သတ်ရင် ကျနော်ကမျက်ကန်းပဲ တစ်လမ်းပဲသွားတယ် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုချစ်​တယ် (ဲမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတာက ကချင် ၊ဗမာ၊က၇င် ၊မွန် ..စသည်ဖြင့် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံကိုေ​ပြာတာပါ) ဘယ်လူမျိုးခြားကိုမှ လက်မခံနိုင်ဘူး ပီးတော့ သူတို့ကိုလည်း လာပါလို့ တောင်းတောင်းပန်ပန် ကြည်ကြည်ဖြူဖြူခေါ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး ခင်ဗျားရိုဟင်ဂျာတွေက မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းနဲ့ ဘူးသီးတောင်မောင်းတောအရေးအခ​င်းမှာ ဗမာမတွေ ရခိုင်မတွေကို အဓမ္မကျင့်တာ လူသတ်တာတွေကိုကော ခင်ဗျားသိလား အေးခင်ဗျားလို ကုလားကိုတော့ သိပ်တော့မပြောချင်ဘူး ရိုင်းတယ်လို့သတ်မှတ်လည်းရတ​ယ် ရင်မခုန်ဘူး ဘာသာ ၊ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအရေးပါလာရ​င် ခင်ဗျားတို့လောက်စကားမကြွယ်​ပါဘူး ဗျာ ဗွင်းဗွင်းပဲပြောတတ်တယ် စကားတစ်ခွန်းကြားဖူးမယ်ထင်တ​ယ် မသိသေးရင်လည်းပြောပြမယ် မှတ်ထား ဧည့်သည်ကဧည်သည်လိုပဲနေလို့ရ​မယ် အိမ်ရှင်ဖြစ်ချင်လို့မရဘူး လူမျိုးကြီးဝါဒလိုပုံစံမျိုးပြောရင် မြန်မာနိုင်ငံက မြန်မာလူမျုိုးတွေအတွက်ပဲ ဘယ်သူ့အတွက်မှမဟုတ်ဘူး ဒါပါပဲပြောချင်တာကတော့
18 hours ago · 13 people like this..
15 hours ago ·3people like this..
၀မ်းသာအားရ ဖြစ်ပါတယ်နော် ဗျ အလကားကုလားတွေ မရှက်မကြောက်ကောင်တွေဗျ သူတို့က
14 hours ago · 1 people like this..
ထွက်သွားပြီလား မှီသေးလား စကားလေးတစ်ခွန်းပြောချင်လို့​ Mahn KoKo
ကျွန်တော်ကတော့ပေးလိုက်ပါတယ် Mahn KoKo ကို
14 hours ago ·6people like this..
မန်းကိုကို November 13, 2011 at 11:41 AM
13 hours ago ·2people like this..
အီရန် သွား နော်။
12 hours ago ·3people like this..
11 hours ago via mobile ·2people like this..
Aung Naing Winn Arakancowboy
မလုပ်ပါနဲ.ဗျာ...ဘင်ဂလီသွာရ​င် မုန်တိုင်းမိပြီး မြန်မာပြည်ကို လှေနဲ.မျောပါနေအုံးမယ်...
10 hours ago ·2people like this..
မရဏ မင်း သား
ဘင်းဂလား သန်း၁၂၀ ကုလားအင်ဒီးယာ ၁၅၀၀ကျော်တရုတ်၁၃၀၀ကျော်ယိုးဒယား ၈၀ကျော်တွေနဲ့နီးတဲ့ဗမာ တရုတ်ကပြား၎သန်းနဲ့ကုလားကပြား၆သန်းကျော်နေပြီး တော်ပါတတော့ကိုကုလား နာတို့ရယ် (၀)တွေ ကိုးကန့်းတွေ ထပ်ပေါင်လိုက်ရင် ( မြနဲ့မောင်နဲ့ခုမှတွေ့တာ လူပါးမ၀ခင်တုန်းက ကလေးတွေ )လားလား.....မိုဟာမဒီသင်္ဘောနဲ့ ၁၉၆၇အရေးအခင်းတွေပြန်လာလိမ့်​မယ်...
Nge Naing November 13, 2011 at 1:45 PM
သမိုင်းကို လိမ်နေတာကို လက်မခံနိုင်တာပဲ ရှိပါတယ်၊ ကျွန်မမှာ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ အမုန်းပွားစရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ အော်စီမလာခင်ကတော့ ထိုင်းမှာတုန်းက ရိုဟင်ဂျာ မိတ်ဆွေတယောက်တောင် ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူက ဗမာလိုရော အင်္ဂလိပ်လိုကိုပါ ကောင်းကောင်းတတ်ပါတယ်။ ဗမာလို ပြောရင် ရခိုင်သံတော့ နည်းနည်းဝဲတယ်။ နာမည်တောင် မမှတ်မိတော့ဘူး ကျွန်မတို့ သူ့ကို အဘိုင်ကြီးလို့ပဲ ခေါ်ပါတယ်။ သူပြောပြချက်အရ သူက ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်း ကိစ္စနဲ့ နိုင်ငံအတော်များများ ရောက်ရောက်ဖူးပါတယ်။ အာရပ်ကမ္ဘာက နိုင်ငံတွေကိုဆို မကြာခဏတောင် ရောက်ပါတယ်။ အာရပ်ကမ္ဘာက ဘယ်နိုင်ငံမှာက သူဘယ်လောက်ကြာတယ် ပြောပြဖူးတယ်။ အဲဒီတော့ တချို့ ရိုဟင်ဂျာဆန့်တဲ့သူတွေရဲ့ ဆောင်းပါးတွေမှာ ရေးထားတဲ့အချက်တွေထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို အာရပ်နိုင်ငံတွေက အကူအညီပေးပြီး ဘာအစီစဉ်တွေ ရှိတယ် စသည်ဖြင့် ရေးထားတာတွေကို အဲဒီအဘိုင်ကြီး ပြောပြဖူးတဲ့အချက်တွေနဲ့ ဆက်စပ်တွေး အခုပြန်တွေးမိတာတော့ ရှိပါတယ်။ ထားလိုက်တော့ ဒါတွေက လက်ခံသူနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။
ကိုမန်းကိုကို ပေးထားတဲ့ Link တွေကို နောက်မှပြန်လာကြည့်တော့မယ်။ ကျွန်မလည်း ကိုမန်းကိုကိုလိုပဲ မအားလို့ မရောက်ဖြစ်ဘူး။ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းမှ မဟုတ်ဘူး အခုဖြစ်နေတဲ့ Current afair တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပို့စ်လေးတခု တင်ချင်ပေမဲ့ ဘယ်လိုမှကို မအားလပ်တာနဲ့ မတင်ဖြစ်ဘူး။ ရေးပြီးတင်လိုက်ရင်တော့ ရနိုင်ပေမဲ့ စောတကတက်လာသူတွေ ရှိမယ်ဆိုတာ သေချာလို့ ပြန်ဆွေးနွေးဖို့ အချိန်မပေးနိုင်လို့ မတင်ဖြစ်တာပါ။ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ လူသားတွေအနေနဲ့ တခြား တရုတ်တွေ ကုလားတွေလိုပဲ လူ့အခွင့်အရေးကိုပဲ ရနိုင်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံထဲက တိုင်းရင်းသားတမျိုးအနေနဲ့တော့ ဘယ်လိုမှ လက်ခံလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုပေးတဲ့နေရာမှာတောင် ကိုမန်းကိုကို ပြောတဲ့အတိုင်း ဘယ်သူက အရင်ကတည်းက ရှိနေသူတွေ ဘယ်သူက ခိုးဝင်လာသူတွေဆိုတာ တချိန်မှာ သေသေချာချာ ပြန်လည်စီစစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
AATO က နောက်ထားတယ်ထင်တယ်။
Nge Naing November 13, 2011 at 1:47 PM
ကိုကျော်ထင်နဲ့ ကို Thu တို့ ပျောက်နေတာ အခုဒီမှာ ပြန်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ ကိုမန်းကိုကိုထက် ကိုကျော်ထင်နဲ့ ကို Thu မှတ်ချက်တွေကိုတွေ့ပြီး ဆွေးနွေးစရာ ပေါ်လာလို့ တလက်စတည်း နည်းနည်း ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
ကိုကျော်ထင်က ဘီဘီစီက သတင်းမှာ ဘာကို အပြစ်မြင်ရမလဲ မသိဘူးဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မအနေနဲ့ ဘီဘီစီကို သပိတ်မှောက်ပြီး နားမထောင်တာကို အားမပေးပေမဲ့ ဘီဘီစီ သတင်းမှားဖေါ်ပြတာကို ကန့်ကွက်တာကိုတော့ လုံးဝထောက်ခံပါတယ်။ ဘာလိုလဲဆိုတော့ အကြောင်းအရာတွေက တခုတည်းအပေါ် အခြေခံပြီး ဖြစ်လာတာ မဟုတ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကမှ Arakan ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ရခိုင်ကိုခေါ်တာကို ရိုဟင်ဂျာတွေက လိုက်ယူလို့ဆိုပြီး ပြဿနာကလည်း ဖြစ်ထားတဲ့အချိန်၊ နောက်တခုကက လောလောလတ်လတ်မှာပဲ အင်္ဂလန်ရောက် ရိုဟင်ဂျာပညာရှင်ဆိုသူက သူတို့ဟာ ဘင်္ဂလားကမဟုတ်ဘူး အာရပ်ကနေ သင်္ဘောပျက်ပြီး ဆင်းသက်လာတဲ့သူတွေကို ဦးတင်ဦးက ဘင်္ဂလားက ခိုးဝင်လာတယ်လို့ ပြောလို့ ဦးတင်ဦးကပဲ သူတို့ကို ပြတောင်းပန်ရမယ်ဆိုပြီး သတင်းမှာ လာထားတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဘီဘီစီက ရခိုင်ပြည်နယ်နေရာကို ရိုဟင်ဂျာနေရာ လုပ်ထားတဲ့ ဒီမြေပုံနဲ့ ဒီသတင်းကို တွေ့လိုက်ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ ဆိုတာကို ကိုကျော်ထင်က အနေနဲ့ ဘာမှ မခံစားရရင်တောင် တွေးကြည့်လို့ ရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မထင်တယ်။ ဒါဟာ ရိုးရိုးသားသား ဖြစ်လာတာတာမဟုတ် မရိုးမသား ဆန်းဆန်းပြားပြား ရှိနေတယ်ဆိုတာလည်း အကြောင်းမသိတဲ့သူဆို တွေးကြည့်ရင် သိသာပေါ်လွင်နေတဲ့အချက်၊ အကြောင်းသိတွေကတော့ တန်းသိနေတဲ့အချက်ပါ။
တဆက်တည်းမှာပဲ ကိုသူက ကျွန်မ ပြောထားတဲ့ ခိုးဝင်လာတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ညွန်းပြီးပြောထားလို့ ကိုသူကို နည်းနည်း ဆွေးနွေးချင်တာက၊ ကျွန်မ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းကို သိပ်မသိပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မတို့ တောတွင်းမှာတုန်းက ABSDF သုတေသန ဌာနကတော့ သုတေသန ပြုစုတဲ့ စာတမ်းတခု ရှိခဲ့ဖူးပြီး အဲဒီတုန်းက ABSDF ရခိုင် စစ်ဒေသဖြစ်တဲ့ တပ်ရင်း ၉၀၁ က ကန့်ကွက်လို့ ရဲဘော်တွေကြားကိုရော ပြင်ပကိုပါ မဖြန့်ဖြစ်လိုက်ဘဲ ရုံးမှာပဲ သိမ်းထားလိုက်ရတယ်။ ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေထဲက တချို့ပြန်ပြောပြလို့ ဦးနုလက်ထက်က ရိုဟင်ဂျာကို အသိအမှတ်ပြုထားပြီး ဖြစ်လို့ တချို့ကလည်း လက်ခံပြီး တချို့ကလည်း လက်မခံဘဲ တန်းလန်းကြီးနဲ့ သိမ်းထားလိုက်ရတယ်ဆိုတာ သိရတယ်။ ဒါကလွဲရင် ကျန်တာ တိတိကျကျ ဘာရေးထားတယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ အခုထိလည်း မသိရဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုလတ်တလော ဖြစ်နေတဲ့အထဲမှာ ကျွန်မ မြင်သမျှ လိုက်ဖတ်တာ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းတခုပဲ ရှိတော့ နှစ်ဘက်စလုံးက ရေးထားတာကို တော်တော်လေး ဖတ်ရလို့ နှစ်ဘက်အမြင်တွေကို တော်တော်လေး သိခွင့်ရပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာကို ကန့်ကွက်နေတဲ့သူတွေဘက်က Emotions သိပ်များနေတာကလွဲရင် အချက်အလက်တွေက ပိုပြီးအကျိုးအကြောင်း ခိုင်လုံနေတာ တွေ့ရတယ်။ ဒေါသတွေ ဖြစ်ပြီး မလိုအပ်တာတွေ ပြောနေတာတွေကိုတော့ ဒါမြန်မာနိုင်ငံသား အတော်များများမှာ ထစ်ကနဲ့ဆို ဒေါသနဲ့ တုံ့ပြန်တတ်တဲ့အကျင့်က ရိုဟင်ဂျာ မလိုလားသူမှမဟုတ်ဘူး အားလုံးနီးပါးမှာ ရောဂါတခုလို ဖြစ်နေတာ ကျွန်မ သတိထားမိတာ ကြာပြီ။ ထားလိုက်တော့ တခြားအချက်အလက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်ခံတဲ့သူနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မလက်ခံထားသလို တခြားသူတွေ လက်ခံချင်မှ လက်ခံမယ်။ ဒါပေမဲ့ ခိုးဝင်တဲ့သူ ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ အနီးစပ်ဆုံးက တခြားဆောင်းပါးတွေက အချက်အလက်တွေ အစွန်းရောက်ပြီး ရေထားလို့ လက်မခံနိုင်သေးရင် ထားလိုက်ပါ။ ကျွန်မကတော့ ရိုဟင်ဂျာပညာရှင် ဆိုသူပြောတဲ့ အာရပ်က သင်္ဘောပျက်ပြီး ဆင်းသက်လာသူတွေဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ လုပ်ကြံပြောဆိုထားတဲ့အချက်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စစ်တပ်မှာ အမြင့်ဆုံးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပြီး အခုအချိန်မှာ အဓိကအတိုက်ခံပါတီ NLD မှာ အထိပ်ဆုံးတာဝန်အထဲက ယူထားတဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း ဦးတင်ဦးပြောတာကိုပဲ လက်ခံမှာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မ ဘလော့ဂ်ကိုလည်း ပို့စ်ပြန်တင်ဖြစ်ရင် လာလည်ကြဖို့ ကြိုဖိတ်ထားပါတယ်။ အခုတော့ မအားသေးလို့။
Nge Naing November 13, 2011 at 1:50 PM
မှတ်ချက် နှစ်ခုထည့်လိုက်တာ Your comment was published ဆိုပြီး နှစ်ခုစလုံးပေါ်ပေမဲ့ ကိုမန်းကိုကို အတွက် ရေးထားတဲ့မှတ်ချက်မပေါ်ဘဲ ကိုကျော်ထင်နဲ့ ကိုသူကိုရေးတဲ့ မှတ်ချက်ကိုပဲ တွေ့တယ်။ Spam ထဲမှာ ပြန်စစ်ကြည့်ဦးနော့်။
ကျော်ထင် November 13, 2011 at 11:10 PM
ဟုတ်ပါတယ် ဆရာမန်း။ ဘီဘီစီဆောင်းပါးက ethnic minorities တွေရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်သဘောထား အသံကိုရေးတဲ့အထဲမှာ ARNO ရဲ့ အသံကိုပါရောထည့်ထားပြီး မူရင်းမြေပုံမှာ ရခိုင်လူမျိုးစုပုံမပါပဲ ရိုဟင်ဂျာပုံပဲ ပါတော့ ရခိုင်သွေးချင်းတွေအတွက် လက်မခံနိုင်စရာဖြစ်သွားတာကို နားလည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာက ကန့်ကွက်သူတွေ ရဲ့ အသံက ဒီဆောင်းပါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဘာကို လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာကို ပြောတာထက် ရိုဟင်ဂျာ တွေရဲ့ lobbyist ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာဝါကာအူဒင်းတို့လို လူတွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေ အပေါ်မကျေနပ်တာတွေရော အခြားမီဒီယာများမှာ ပါတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ အသံတွေအပေါ်မကျေနပ်တာတွေကိုပါ ရောမွှေပြောနေကြသလားလို့ပါ။ BBC ဖက်ကကြည့်လျင်လဲ သူတို့က ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ ပြည်နယ်တောင်းဆိုမှုတို့ တိုင်းရင်းသားအဖြစ်အသိမှတ်ခံရဖို့တောင်းဆိုမှုတွေကို explicitly တင်ပြပေးနေတာမဟုတ်ပဲ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ လူနည်းစု တစ်မျိုးရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်အသံကို တင်ပြပေးတာဆိုတော့ မကျေနပ်သူတွေရဲ့ ကန့်ကွက်ပုံက နဲနဲ ဟ နေတယ်လို့ပဲ ပြောချင်တာပါ။ ဒီလောက်ပြောနေတာကိုပဲ ရဲရဲတောက်တွေ မြင်မိရင် ကျုပ် ရိုဟင်ဂျာတွေကို ထောက်ခံနေပါတယ် ဆိုပြီး ဆွမ်းကြီးအလောင်းခံရအုံးမလား မသိဘူး :)
NLD မှတ်ပုံတင်ချင်း ကိစ္စနဲ့ စပ်လျဉ်းလို့တော့ ဆရာမန်း အမြင်က မျှတသင့်တင်ပါတယ်။ ဒိုင်ယာလော့တောင်းတယ်။ ရပြီ။ ဒါပေမယ့် ပိုမိုပြီး inclusive ဖြစ်တဲ့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးကို အဆင့်ကျော်ပြီး ဒေါ်စုနဲ့ သမတရဲ အုပ်စုနဲ့ သာ privately ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတော့ ရုတ်တရက် လက်ခံရခက်သူတွေ၊ နားလည်ရခက်နေသူတွေ ပေါ်လာတာပေါ့ဗျာ။ အခြားသူတွေပြောနေကြသလို ကိုယ့်ဖက်က လိုချင်တာတွေ အကုန်ရမှ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုတော့လဲ တိုင်းပြည်ပြသနာတွေ ပြေလည်မှ ကိုယ်က အသာလေးဖျာဝင်ခင်းထိုင်သလိုဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာ။ ရလာတဲ့ အခွင့်အရေးသေးသေးလေးကနေ ပိုကြီးကြီးဖြစ်လာအောင် ပွဲခင်းထဲ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လိုက်မှသာ ပိုပြီး မြန်မြန်ရွေ့လာမယ်မဟုတ်ဘူးလား။ နို့မဟုတ်ရင် အတိုက်အခံရဲ့ အလုပ်က ဘာလဲ၊ မတရားတာတွေ တရားလာအောင်၊မမှန်တာတွေ မှန်လာအောင်မဟုတ်ဘူးလား။ ဒါဆို အရင်ကကျ စောစောဝင်မလုပ်ပဲ အခုကျမှလုပ်စရာလား အပြောနဲ့ အလုပ်ညီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလာသူတွေအတွက်တော့ အရင်အခင်းကျဉ်းနဲ့ အခုအခင်းကျဉ်းမတူဘူးဆိုတာကို သတိပြုမိကြစေချင်တယ်။ အများစုသော လူထုနဲ့ အဓိကကျတဲ့ ပြည်တွင်းအင်အား အများစုကလဲ ဒီလိုပဲ သဘောရှိနေတာ လက်တွေ့ပဲလေ။
မငယ်နိုင် တကူးတက ရှင်းလင်းပြောပြတာ ကျေးဇူးပါ။ ပြောတာတွေကို လက်ခံပါတယ်။ အရင်လို အချိန်သိပ်မပေးနိုင်တော့ အပြန်လှန်ငြင်းခုန်နိုင်မှရမယ့် ပို့စ်တွေမှာ ကွန်မန့်ရေးဖို့ မဖြစ်နိုင်တာမို့ ဒီနောက်ပိုင်း ပျောက်ချက်သားကောင်းနေတာပါ။
ကျော်ထင် November 14, 2011 at 12:14 AM
Thu November 14, 2011 at 1:55 PM
မငယ်နိုင်,I've been your blog frequently unless left the comments.
Ko man ko ko, Please see the following of Bogyoke, I prefer most is his sincerity and leader's responsibility for sake of peoples, common benefits,
"ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ တာဝန်ယူမှု ဥပမာ နှစ်ခု"
I rememberateacher word in camp fire party who seizedachicken and talked toastudent who finishedalife " Ok, I share your bad merit for sake of all".
မန်းကိုကို November 15, 2011 at 12:11 AM
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ရိုးသားမှု ၊ စေတနာ ၊ အနစ်နာခံတာနဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်တွေဟာ မေးခွန်းထုတ်စရာ မရှိသလောက်ပါပဲ ။ ဒါပေမဲ့ ၊ အဲဒါတွေကြောင့် သူလုပ်သမျှ အမှန်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး ။ တစ်ဖက်မှာလည်း သူ့ရဲ့ တာဝန်ယူတာ ၊ ရင်ဆိုင်ရဲတာ တွေကတော့ လေးစားစရာပါ ။
Thu ညွှန်တဲ့ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်နဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ ကျနော်လည်း အရင်က စာထဲမှာ ဖတ်မိသမျှ အကြွင်းမဲ့ လက်ခံမိခဲ့သူပါ ။ ကနေ့ အချိန်မှာတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး နောက်တစ်လှမ်း ဆုတ်ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ် ။ ကိုယ့် တိုင်းရင်းသားတွေ အတွက်ပါ အပါအဝင်ပေါ့ ။
ဒီတော့ ခုချိန်မှာ အချို့ကိစ္စတွေကို ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရင်း မေးခွန်းတွေ အများကြီး ရှိလာခဲ့ပါပြီ ။ ခုနေပြောရင် ရမ်းတုတ်သလို ဖြစ်မှာစိုးလို့ အချိန်အခါစောင့်ပြီး သိမှီသူတွေ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရေးလို့ရတဲ့ အချိန်ရောက်လို့ ၊ ရေးလာကြတဲ့ အခါကျမှ ဂဃနဏ ဆက်ဆွေးနွေးကြလို့ ရမယ်ထင်ပါတယ် ။ လက်ရှိမှာတော့ ကိုယ့်လူ မကောင်းတာဆိုချန် ၊ ပညာရှင် မဆန်ပဲ ဆန္ဒာဂတိတွေလိုက်ပြီး ရေးခဲ့ကြတာမျိုး အတော်များနေတယ်လို့ ယူဆမိပါတယ် ။
ဆင်တူယိုးမှား အနေနဲ့ ဥပမာပြချင်တဲ့ အဖြစ်တစ်ခုက ၊ ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန်ဖက်မှာ တာဝန်ကျခဲ့တဲ့ ဗျူဟာမှူးဟောင်း စာရေးဆရာ သောင်းဝေဦး ရေးခဲ့တဲ့ စစ်ဗိုလ်ဘဝ အတွေ့အကြုံ စာအုပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုငြိမ်းဝေ ထောက်ပြ ထားတာကိုပါ ။ (http://sandaywe.blogspot.com/2011/07/blog-post_10.html) ။ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် နဲ့ အတူတူပဲလို့တော့ မဆိုလိုပါ ၊ ပုံပမာ ပြချင်ရုံ သက်သက်ပါ ။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင်တော့ မကျေနပ်သူတွေရဲ့ ကန့်ကွက်ပုံက နဲနဲ ဟနေရုံ မဟုတ်ဖူးဆရာ ၊ အချို့ နေရာတွေမှာ တချဲစီ (တခြားစီ) ကို ဖြစ်နေတော့တာပါပဲ :D
ပွဲစကတည်းက ဟိုတစ်စ သည်တစ်စ လိုရာဆွဲပြီး ပွဲထွက်လာတော့ ၊ ဌက်ပျောတော မင်းသားလို ဖြစ်နေတာကြောင့် ၊ လက်အုပ်ပဲ ချီပြချီပြ ၊ ပညာစုံထုတ်ပြီးပဲ ကပြပြ ၊ မင်းသားကြီးလို ဘယ်လိုမှ မခန့်ထယ်နိုင် သလိုပါပဲဗျာ ။ ပြောရတာလည်း အားနာပါတယ် ။ ဒီကြားထဲ ဧရာဝတီ ဆန့်ကျင်မှု အရှိန်ကို နာမည်ခံလမ်းလွဲပြီး အသုံးချချင် သူမျိုးတွေ ၊ ကျိုးကြောင်း အချက်လက်တွေနဲ့ ပြောဆိုချင် သူမျိုးကို အမျိုးမျိုး သမုတ်တာတွေနဲ့ war on everything သမားတွေ အထွေးလိုက် ပေါ်ထွက် လာချိန်မှာတော့ အဖတ် သိပ်ဆယ်လို့ မရနိုင်တော့ သလောက်ပါပဲ ။ အချိန်တွေ အများကြီး ယူကြရ ဦးမှာပါ ။
စိတ်တော့ သိပ်မပူပါနဲ့ ၊ ခုလောက်ဆို ကိုကျော်ထင်လည်း “ရိုဟင်ဂျာတွေကို ထောက်ခံသူ” အဖြစ် အလိုအလျှောက် ရာထူး အပေးခံရလောက်ပါပြီ :D
တိုင်းရင်းသားလို့ သတ်မှတ်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၊ ဒေါက်တာအေးကျော်ပြောတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်က ဥပဒေကိုမှီပြီး ကျနော် အပေါ်မှာ ပြောလိုက်တာပါ ။ သူပြောတဲ့အတိုင်း အောက်မြန်မာပြည်ကို အင်္ဂလိပ် မသိမ်းခင်အထိ ရှိခဲ့ကြတဲ့ လူမျိုးနွယ်စုတွေကို တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတွေလို့ သတ်မှတ်ရင် ၊ မြန်မာပြည်မှာ လူမျိုးအချို့ တိုးပြီး ၊ အချို့ လျော့တောင် လျော့သွားနိုင်တယ် ထင်ပါတယ် ။ အတည်ယူဖို့ ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဆက်စပ်ပြကြည့်တာပါ ။ နောင်လည်း တစ်တိုင်းပြည်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ဆွေးနွေး ဖြေရှင်းရတာမျိုး ဖြစ်လာကောင်း ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ။
ကျနော့် အမြင်မှာတော့ ၊ လက်ရှိမှာ ဘယ်လူမျိုး ၊ ဘာသာ ၊ အဖွဲ့အစည်းမဆို ပြဿနာ ကိုယ်စီနဲ့ပါ ။ တည့်တည့်ရေးရင်လည်း မကောင်းတတ်လေတော့ နောက်ပို့စ်တွေမှာ အခါအားလျှော်စွာ သင့်တော်တဲ့ အရေးအသားတွေနဲ့ နည်းနည်းစီ ထည့်သွားပါဦးမယ် ။
Feel free to visit my website ... homes for sale in weslaco tx
အတ္တတောင်ကိုကျော်၍ အမုန်းသမုဒ္ဒရာထဲသို့ ခုန်ဆင်းခြင်...
Critical Thinking မိတ်ဆက် (၃ -၂)
သတ်ပုံ မှန်လုလု သာဓု
ရွှေတစ်ခေတ် မပြေပြစ်ခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လွှာ
တစ်ကိုယ်တော်ဓါးသမား ၊ ခြေလျင်စစ်သားနဲ့ လက်ခုတ်တီးသ...